ချို ပေါ့ ကျ (July) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » ချို ပေါ့ ကျ (July)
ချို ပေါ့ ကျ (July)
Posted by black chaw on Jul 24, 2012 in Contributor, Columnist, Creative Writing, Editor's Choice, Myanma News, News, Opinions & Discussion, Photography, Thakhin: CJ Only, Travel | 90 comments
ဒီပို့စ်က ကျွန်တော့် ရဲ့၂၀၀ မြောက်ပို့စ်ပါ…။
အထိမ်းအမှတ် တစ်ခုအနေနဲ့ ဇူလိုင်လရဲ့မိုးအေးအေးမှာ ချိုပေါ့ကျ လေးနဲ့
ငှက် တစ်ကောင်အကြောင်း လေးလေးစားစား ပြောခွင့်ပြုပါဗျာ…။
ယောနသံ ဆိုတဲ့ စင်ရော် ငှက်ကလေး …။
အဲဒီ ငှက်ကလေး တစ်ကောင်က ကျွန်တော့် စိတ်ကို အကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ…။
ယောနသံစင်ရော် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကျွန်တော် စကြားဘူးခဲ့တာ ကိုင်ဇာ ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာပါ…။
သီချင်းနာမည်က နေဆီပျံမယ့်ငှက် တဲ့။
သီချင်းရေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က နိုင်မြန်မာ ပါ…။
ကိုင်ဇာ ဆိုပြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ နိုင်မြန်မာရေးတဲ့ သီချင်းတွေက အများကြီးပါ။
ဒီသီချင်းကတော့ ကိုင်ဇာနဲ့ နိုင်မြန်မာ အတွဲရဲ့ ပထမဆုံးသီချင်းလေး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တေးရေး – နိုင်မြန်မာ တေးဆို – ကိုင်ဇာ
လူတကာထဲမှာတော့ ….ဘယ်သူနဲ့မှလည်း မတူပါဘူး….
ပြန်လည်ကာ သုံးသပ် ကြည့်တော့လေ…
ပဒေသာပင် ဘ၀မှာလည်း မနေချင်ဘူး…
ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ အလုပ်ကို ဆက်လုပ်မယ့်…
ဒီနေရာမှာ အခက်အခဲတော့ ရှိမယ်…
နေဆီကို ပျံနေချိန်မှာ မိုးကောင်းကင်ရဲ့…
ဘ၀သင်ကြား နားလည်မှု ရခဲ့ပြီ…
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရင်ဆိုင်လာမယ့် အနိစ္စတရား
ပြေးလို့လွတ်မလား ဘ၀ရဲ့ အချိန်များ ရှိနေတုန်း အသုံးချရဲရမယ်…
(ယော…နသံ စင်ရော်) (စင်ရော်ရယ်)၄
(ယော …နသံ စင်ရော်)
အဲဒီသီချင်းရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် ယောနသံစင်ရော် ကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားခဲ့ရပါတယ်…။
အဲဒီအချိန်က ကလေးသာသာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေကို မေးရင်းစမ်းရင်းနဲ့
ဆရာကြီး ဘသန်း (ဓမ္မိက)ဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့ ယောနသံစင်ရော် ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါးပါး လေးတစ်အုပ်ကို ဖတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်…။
အဲဒီအချိန်က စလို့ ယောနသံစင်ရော် ဆိုတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်ဟာ ကျွန်တော့်စိတ် ကို အကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုး ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ…။
အခုလက်ရှိ ကျွန်တော့် Avatar မှာသုံးထားတဲ့ ငှက်ပုံလေးဟာ ယောနသံ စင်ရော် ရဲ့ အော်ရီဂျင်နယ်
Jonathan Livingston Seagull စာအုပ် ရဲ့ မျက်နှာဖုံးပါပဲ…။ RICHARD BACH ရေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆက်ပြောချင်သေးတာက Avatar မှာ သုံးထားတဲ့ စာသားလေးတွေ…။
နေဆီကို ပျံနေချိန်မှာ မိုးကောင်းကင်ရဲ့
ဆိုတာလေးဟာ နိုင်မြန်မာရေးပြီး ကိုင်ဇာ ဆိုခဲ့တဲ့ နေဆီပျံမယ့်ငှက် သီချင်းရဲ့ CHORUS အပိုဒ်က စာသားလေးတွေပါပဲ…။
ကျွန်တော့် စိတ်အတွေးကို ယောနသံစင်ရော် ဆိုတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်က အဲဒီလောက် လွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့တာပါ…။
ကဲ… အဲဒီ ယောနသံ စင်ရော် က ဘာလောက်များ ထူးခြားတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်တဲ့လဲ…။
ပင်လယ်စင်ရော် အမြောက်အများသည် ကမ်းခြေမှသည် အစာရှိရာသို့၊ အစာရှိရာမှသည် ကမ်းခြေသို့ သမားရိုးကျအတိုင်းသာ ပျံတက်ကြ၏။ ထို့ထက်ပို၍ အပျံတတ်အောင် ဂရုမမူကြ။ ငှက်စင်ရော်များအဖို့ ပျံသန်းမှုသည် အရေးကြီးသောကိစ္စမဟုတ်။ သူတို့အဖို့ အစာစားမှုသာလျှင် အရေးကြီး၏။ ယောနသံစင်ရော်အဖို့မူ အစားက ကိစ္စမကြီးလှ။ အပျံသာလျှင် ကိစ္စကြီးဖြစ်၏။ ပျံသန်းခြင်း အတတ်ပညာကိုသာလျှင် အရာရာထက် သူ ပို၍ မြတ်နိုး၏။
အစာစားဖို့ ထက် ပျံသန်းခြင်း အတတ်ပညာကိုသာ ပိုမြတ်နိုးတယ် ဆိုတဲ့ ယောနသံစင်ရော်…။
စင်ရော် နှင့် မတူတော့သော ယောနသံစင်ရော်ကို မိဘတွေက ဆုံးမကြတော့ တခြားစင်ရော်တွေနည်းတူ နေထိုင် ပြုကျင့်ရန် ကြိုးစားကြည့်ပါသေးသည်။
သူ့ဖခင်ကလည်း သူ့အား သနားသောအားဖြင့် ဤသို့ ဆို၏။ “ဆောင်းဥတုလည်း မဝေးတော့ဘူး။ လှေတွေလည်း အလာနည်းတော့မယ်။ ရေပြင်က ငါးတွေလည်း ရေနက်ထဲ ပြောင်းကူးကြတော့မယ်။ မင်းဟာ အတတ်တစ်ခုခုကို လေ့လာမှ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် အစားအတတ်နဲ့ အစားရဖို့ အတတ်ကိုသာ လေ့လာစမ်းပါ။ ဒီ အပျံအလုပ်ဟာ ကောင်းတော့ ကောင်းပေမယ့်လို့ လေဟုတ်စီးတဲ့ အလုပ်မျိုးဆိုတာ စားရတာမျိုးမှ မဟုတ်ဘဲ။ မင်းလည်း သိသားပဲ မဟုတ်လား။ မင်း ပျံရတဲ့ အကြောင်းရင်းဟာ အစားစားမှုအတွက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မင်းမမေ့စမ်းပါနဲ့”
မိဘစကားကို နားထောင်သည့်အနေဖြင့် တခြားစင်ရော်များနည်းတူ နေထိုင်ပြုကျင့်ရန် ကြိုးစားကြည့်ပါသော်လည်း
အဓိပ္ပာယ်မရှိသော အလုပ်မျိုးဟု ထင်မိပြန်သဖြင့် ပျံသန်းခြင်း အတတ်ကိုသာ ဆက်လက်သင်ယူခဲ့ပါသတဲ့ဗျာ…။
ရလာဒ်ကတော့ ငှက်အုပ်ကြီးအတွင်းက အကြဉ် ခံရခြင်းပါပဲ…။
ယောနသံ က ရှင်းပြပါသေးသည်။
“ဘယ့်နှယ့်ဗျ။ ကျွန်တော် တာဝန်မဲ့ ပြုတယ်တဲ့လား။ ကျွန်တော့် ညီများ အစ်ကိုများတို့…။ ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ဘ၀ရဲ့ ကိစ္စတွေကို တွေ့ရှိရပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ စင်ရော်တစ်ကောင်တစ်လေထက် ဘယ်သူကပိုပြီး တာဝန်သိ ဖြစ်နိုင်ပါသေးသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မျှ ငါးခေါင်းများနောက်ကိုချည်း တကောက်ကောက် လိုက်နေခဲ့ကြရာက အခုမှသာ ဘ၀ရဲ့ ယုတ္တိရှိမှုကို တွေ့လာရတာပါ။ သတ္တ၀ါဆိုတဲ့ ဘ၀ကို ရလာကြရတာဟာ သင်ယူဖို့၊ တွေ့ရှိဖို့၊ လွတ်ဖို့၊ ကျွတ်ဖို့ ပဲ ဆိုတာလေဗျ။ ကျွန်တော်ခုတွေ့ထားတာကို ပြပါရစေဦး။ ဒီတစ်ကြိမ်လောက်တော့ခွင့်ပြုပါ”
အစွန့်ပစ်ခံ စင်ရော်ငှက်တစ်ကောင်ရဲ့ တစ်စိုက်မတ်မတ်သင်ယူခြင်း…။
ငှက်တစ်သန်းမှာမှ တစ်ကောင်ထူး ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ယောနသံ စင်ရော် ရောက်ရှိသွားတဲ့ ဘုံ တစ်ခု…။
သင်ကြားပေးလို့ ရနိုင်မည့် စင်ရော် တစ်ကောင် နှစ်ကောင်လောက်တော့ဖြင့် ရှိကောင်းရှိမှာပဲ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ မြေကြီးဘုံသို့ ပြန်ခဲ့တဲ့ ယောနသံစင်ရော်…။
ယောနသံ စင်ရော် စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့မှ ကိုင်ဇာ့ သီချင်းပါ စာသားတွေကို နားလည်လာသည်…။
ဆိုင်သည် မဆိုင်သည်တော့ မသိ…။
ဗုဒ္ဓ ကိုလည်း သတိရမိသည်…။
ဖတ်သူတစ်ဦးချင်းကိုလိုက်၍ သတိရမိတာတွေလည်း ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်…။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှ စ၍ အခုအရွယ်ကြီးအထိ ကျွန်တော့် စိတ်ကို လွှမ်းမိုးထားနိုင်ဆဲဖြစ်သော ဆရာကြီး ဘသန်း (ဓမ္မိက) ဘာသာပြန်သည့် ယောနသံစင်ရော် စာအုပ် ကို ဖတ်ကြည့်ကြဖို့ ညီငယ် ညီမငယ် တွေကို တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေက တော့ဖြင့် ဖတ်ပြီး ဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည်သဖြင့် ထည့်မပြောတော့ပါ။
စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတစ်ခုခုကိုတော့ဖြင့် ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ ရဲရဲ ကြီး အာမခံနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
(PDF ဖိုင်ဖြင့် ဖတ်လိုသူများ ကိုနေ၀န်းနီ ထံ ဆက်သွယ်တောင်းယူ နိုင်ပါကြောင်း…)
ယောနသံစင်ရော် စာအုပ် ပါ စာစုလေးတစ်ခုဖြင့် ဒီစာစုလေးကို အဆုံးသတ်ချင်ပါသည်။
တံငါလှေများနှင့် ဗောတံတားတိုင်များ တစ်ဝိုက်တွင် အော်ကာဟစ်ကာ ရန်ဖြစ်ကာ ငါးအတုံးအတစ်များနှင့် ပေါင်မုန့် အပိုင်းအစများကို ထိုးသုတ်ကာနေ၏။ သို့သော်လည်း သူသည် ဤအလုပ်မျိုးကို ဆက်၍ လုပ်မနေနိုင်…။
စိုင်းခမ်းလိတ် ပြောပြတဲ့ သီချင်းလေးတွေ အကြောင်း… (ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်း)
တေးရေး စိုင်းခမ်းလိတ်ကြီးနဲ့ တေးဆို စိုင်းထီးဆိုင်တို့ရဲ့ ရာဇ၀င်မှာ
လူကြမ်းမင်းသားဆိုတဲ့ စီးရီးခွေ တစ်ခွေကလည်း အထင်ကရ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် ကျောင်းဒကာ။ မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၈၁ လောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ သီချင်းစီးရီးပေါ့။ အဲဒီအခွေထဲက စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ နာမည်ကြီးစာရင်းဝင် သီချင်းလေးတွေ ဖြစ်တဲ့
နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတယ် သီချင်းနဲ့ လိုချင်တာမိဖုရား ညားတော့ဘုရင်မ
သီချင်းတို့အကြောင်းကို ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ကြီးနဲ့ ဆရာဝင်းကိုကို တို့ ပေဖူးလွှာ ၁၉၈၁ အောက်တိုဘာလထုတ်ထဲမှာ ပြောခဲ့ဆိုခဲ့ကြတာလေး အမှတ်တရအနေနဲ့ ပြန်ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့လည်း မမွေးခင် ကျွန်တော်တို့တောင် ကောင်မလေးတွေ ဆက်စီဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားရကောင်းမှန်း မသိသေးတဲ့ အရွယ် လောက်ကမို့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်သွားတဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ဖတ်ရတာ အရသာတစ်ခုရမှာပါ။
ကဲ ဟုတ်မဟုတ် ဖတ်ကြည့်ကြမယ်ဗျာ…။
နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတယ်
ရေး – စိုင်းခမ်းလိတ် ဆို – စိုင်းထီးဆိုင်
အဆင်မပြေမှုတွေ ခုတလောမှာ အဖေါ်တွေစုပြီး ၀င်ရောက်လာ
နဂိုက မဟန်တဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ဟာ၊ ဖရိုဖရဲဖြစ်ပြီ….။
တကယ်ပိုင်ဆိုင်ရင် ကိုယ့်ဘ၀ဟာ စိတ်အေးရပြီ…။
CHO ; ဘာကို အပြစ်ရှာ ပုံမှာလဲ တရားခံအရင်းဟာ ဘယ်သူလဲ
ကိုယ်လေ စဉ်းစား မရနိုင်တိုင်း နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတယ်…။
ဒီကမ္ဘာလောကရဲ့ သစ္စာ ဒီလူသားရဲ့ အမှန်တရားဟာ
ဒါကိုခေါ်သလား အရွဲ့တိုက်ချင် အောင့်အည်းမရပြီ…။
လှံလှံချင်းလည်း မဖြေရှင်းချင် ရန်ရန်ချင်းလည်း မတုံ့နှင်းချင်
ဒါပေမယ့်လည်း ဒေါသနဲ့ စိတ်ထိန်းမရပြီ…။
CHO ; သိုလှောင်ထားတဲ့ နာကျင်မှု မျိုသိပ်ထားတဲ့ မကျေနပ်မှု
တစ်ခါပေါက်ကွဲမှ စိတ်ပြေမယ် နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတယ်…။
ဘာကိုအပြစ်ရှာ ပုံမှာလဲ တရားခံအရင်းဟာ ဘယ်သူလဲ
ကိုယ်လေ စဉ်းစားမရနိုင်တိုင်း နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတယ်…။
၀င်းကိုကို – ဆရာ့ရဲ့ ဒီသီချင်း ခေါင်းစဉ်ကို ကြားလိုက်ရတော့ ရုတ်တရက် ကျွန်တော် တွေးမိတာက နံရံလေးဘက်နဲ့ ကာရံထားတဲ့ အချုပ်ခန်းထဲ ရောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်က ဒေါသနဲ့ နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် စာသားကို လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ တေးရေးသူမှာ ခံစားချက်တစ်ခု ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ဒီသီချင်းရေးတဲ့ ဆရာ့ရည်ရွယ်ချက်ကို သိပါရစေ…။
စိုင်းခမ်းလိတ် – ဒီသီချင်းကို အပေါ်ယံကြောလောက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ နံရံလေးဘက်ကာဆီးထားတဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းလို့ ထင်မိမှာပဲ…။ ဒါပေမယ့် မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့လောကမှာ ရှိတဲ့ လေထုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေရဲ့ ဖိနှိပ်ကာရံထားတဲ့ ကြားက တေးရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို တင်ပြခြင်းပါပဲ
၀င်းကိုကို – တေးရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ဆိုတော့ ဆရာကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးလား။ ဒါမှမဟုတ် တေးရေးသမား လောကမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေကို ဆရာ ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ တင်ပြထားတာလား။
စိုင်းခမ်းလိတ် – တေးလောကမှာ ကျွန်တော့်နည်းတူ ခံစားနေရတဲ့ တေးရေးသမားတွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။ မခံစားရပဲ အေးအေးသက်သာ ရပ်တည်နေနိုင်သူတွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီသီချင်းကိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခံစားနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မူတည်ပြီး ရေးထားတာပါပဲ။
၀င်းကိုကို – အဲဒီအကြောင်းကလေးကို ဆရာ့တေးချစ်ပရိသတ်တွေ သိရအောင် ပြောပြပါလား။
စိုင်းခမ်းလိတ် – ဒီအကြောင်းကို ပြောရရင် နည်းနည်းတော့ ရှည်လိမ့်မယ် ကိုဝင်းကိုရေ့။ တေးလောကမှာ သီချင်းဆိုတဲ့သူ၊ တီးဝိုင်းအဖွဲ့သားတွေ၊ နောက်ခံဆိုပေးတဲ့သူ၊ မန်နေဂျာတွေ၊ တာဝန်ခံထုတ်ဝေသူတွေဆိုပြီး အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ တေးရေးသမားတွေ အတွက် ဘယ်လို အခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတာ အရင်ပြောပြ ချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာက ဆိုသူ တီးသူတွေကို ထားလိုက်တော့…။ တေးရေးသမားတစ်ယောက် သီချင်းတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ် စွံသွားရင် ငွေတွေ အဆမတန်ရနေကြတယ်။ ဘ၀အာမခံချက်တွေ ရှိနေကြတယ်။ ဒါတွေ ကျွန်တော် ပြောပြနေတာက သူတို့လောက် ကျွန်တော်တို့ ရရမယ် ဆိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့တန်ရာတန်ကြေးရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် ရပိုင်ခွင့်အနေနဲ့ ရချင်ပါတယ်။ ရနေမယ်ဆိုရင်လည်း ဘ၀အတွက် စိတ်အေးနေရမယ်။ ခုတော့ ဒီလို မဟုတ်ဘူး။ အဆင်မပြေမှု တစ်ခုလောက် ဒါမှမဟုတ် အဖေါ်စုပြီး ပြုံဝင်လာတဲ့ အခိုက်မှာ ဘ၀ဟာ ဖရိုဖရဲ ဖြစ်တဲ့အထိ ဆိုးလှပါတယ်…။ ဒီမပြေလည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေအတွက် ဘယ်သူ့ကို လက်ညှိုးထိုးရမလဲ၊ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်ပုံရမှာလဲ၊ တရားခံအရင်းဟာ ဘယ်သူလဲ၊ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အဆိုတော်လား၊ ဒါမှမဟုတ် မန်နေဂျာလား။ ဒါမှမဟုတ် ဒူးနှံ့နေတဲ့ ထုတ်ဝေသူလား၊ ဘဲဥ အစရှာမရတဲ့ အဖြစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ဗျာ အပြစ်မဲ့တဲ့ နံရံကိုပဲ တရားခံလို့ သတ်မှတ်ပြီးတော့ လက်သီးနဲ့ ထိုးနေရတဲ့ အဖြစ်ပါပဲ…။
၀င်းကိုကို – ဒီလိုခံစားရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့အနေနဲ့ တေးလောကကို ဘယ်လိုမြင်လဲ…။
စိုင်းခမ်းလိတ် – ဒါလောက် ကြီးကြီးမားမား ကြိုးစားလာရတဲ့ တေးရေးသမားတစ်ယောက်ဟာ ဒါလောက်ကလေးပဲ ခံစားရတယ်ဆိုတော့ ဒီတေးကမ္ဘာ တေးလောကရဲ့ သစ္စာဟာ ဒါကိုပဲ ခေါ်တာလား၊ တေးလောကသားတွေရဲ့အမှန်တရားဆိုတာကော ဒါကိုပဲ ခေါ်တာလား။
၀င်းကိုကို – ဒါဆို ဒီတေးလောကကို ဆရာက ဘယ်လို တုန့်ပြန်ချင်သလဲ ဆရာ။
စိုင်းခမ်းလိတ် – ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တုန့်ပြန်ဖို့ရာဆိုတာ လှံကိုလှံခြင်းလည်း မဖြေရှင်းချင်ဘူး။ ရန်ကိုရန်ခြင်းလည်း မတုံ့နှင်းချင်ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ သိုလှောင်ထားတဲ့ နာကျင်မှု၊ မကျေနပ်မှု ဒေါသတွေဟာ မျိုသိပ်လို့ မရတဲ့အဆုံး ပေါက်ကွဲထွက်လာတာကတော့ နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတယ်….။
ဒါကတော့ နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတယ် သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ ရင်ဖွင့်ချက်လေးတွေပါ။ ဒီ ရင်ဖွင့်ချက်လေး ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ရွာသူားတွေ အတွက် ဖီလင်တစ်ခုခု ရရှိစေပါလိမ့်မယ်…။ ဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်ကြီးက လိုချင်တာမိဖုရား ညားတော့ ဘုရင်မ ဆိုတဲ့ သီချင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေး ဆက်ပြောပါသေးတယ် ခင်ဗျာ…။ ဒီသီချင်းကိုတော့ တော်တော်များများ သိနေကြမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ စာသားလေးတွေ အရင်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ။
၀င်းကိုကို – ဒီသီချင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံကလေး ပြောပြပါဦး။
စိုင်းခမ်းလိတ် – ကြာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်လောက်ကပေါ့။
ကျွန်တော်က အဲဒီတုန်းက ဆေးကျောင်းသားပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးကတော့ ဒေါက်တာဖြစ်နေပြီ။
တစ်နေ့တော့ အမျိုးသမီးက မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတစ်ခု ကျွန်တော့်ကို လာပြတယ်။ ကျွန်တော်က ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ဒေါက်တာဒေါ်နွဲ့နွဲ့တင် နှင့် ခင်ပွန်းလို့ ရေးထားတာ တွေ့ရတယ်။ ဗြုန်းဆို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ
တစ်မျိုးပဲ ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ဗျာ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်မှာ (မူရင်းအတိုင်း ရေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ) သျှောင်နောက်ဆံထုံးပါ ဆိုတာလို ယောက်ျားကိုပဲ ရှေ့တန်းက ဦးစားပေး ထားကြပါတယ်။ ခုဖိတ်စာကျတော့ အမျိုးသမီးနာမည်ကို ရှေ့က ထားပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုတော့ နောက်မှာ နာမည်တောင် မတပ်ပဲနဲ့
( နှင့်ခင်ပွန်း ) လို့ပဲ ဖေါ်ပြထားတာ ဆိုတော့ တော်တော်လေး ခံစားရတယ်။
ဒီဖိတ်စာကို ဖတ်ပြီးတိုင်း တအုံနွေးနွေးနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားရခက်နေတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သီချင်း တစ်ချိန်ချိန်မှာ ရေးမယ်လို့ တေးထားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကြောင်းရေးပြီး မကြိုက်လိုက်၊ သုံးလေးကြောင်းရေးပြီး မကြိုက်လိုက်နဲ့ တော်တော်ကြာသွားတယ်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော် မေမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ အချိန်ကျမှ ဒီသီချင်းကို ရေးဖြစ်တော့တယ်။
ဒီလို ခံစားရတဲ့ လူတွေ ကျွန်တော်အများကြီး တွေ့ဖူးပါတယ်။ ခုနက ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ ဖိတ်စာ ရေးလိုက်တဲ့သူဟာ လူမှုရေးအရ နားမလည်ပဲနဲ့ ရေးလိုက်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် သိလျက်နဲ့ ယဉ်ယဉ်ကလေး နဲ့ ရွဲ့လိုက်တာလား ဆိုတာ ကျွန်တော်ဝေခွဲလို့ မရဘူး။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်တွင် မကပါဘူး။ အရှေ့တောင် အာရှမှာပါ ယောက်ျားကသာ ရှေ့က၊ ယောက်ျားကသာ အိမ်ဦးအရာဆိုတာ နဂိုကတည်းက သတ်မှတ်ပြီးသားပါ။ ဒီတော့ ခုအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မဖေါ်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် ပြောစရာဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နောက်နောင် ဖိတ်စာရေးတဲ့သူတွေ စဉ်းစဉ်းစားစား ရေးနိုင်အောင် ဒါမှမဟုတ် သူတို့က နောက်ထပ်ဒီလို ဖိတ်စာမျိုး ရေးလာဦးမယ် ဆိုရင် သူတို့ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ဆိုတာ သူတို့ကို စိန်ခေါ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးလိုက်တာပါပဲ။
၀င်းကိုကို – မိဖုရားနဲ့ ဘုရင်မ ဝေါဟာရနှစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာ့ခံစားချက်ကရော…။
စိုင်းခမ်းလိတ် – ဒီဝေါဟာရနှစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်ခံစားရတာကတော့ (မိဖုရား) ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားလိုက်ရရင် ကူညီချင်စိတ်၊ ဖေးမချင်စိတ်၊ လက်တွဲခေါ်ချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွားပေါ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် (ဘုရင်မ) ဆိုတဲ့စကား ကြားလိုက်ရရင်တော့ ကိုယ်ကပဲ ရှစ်ခိုးရတော့မှာလိုလို ခစားရတော့မှာလိုလို အဲဒါမျိုးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ ဒီဝေါဟာရနှစ်ခုက အဲဒါလောက် ကွဲပြားတဲ့ ခံစားချက်ကို ပေးနိုင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ ဘုရင်မကိုလည်း (ကွင်း)ပဲ။ မိဖုရားကိုလည်း (ကွင်း) ပဲ။ ဘာမှသိပ်မထူးသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ဗမာစကားမှာကျတော့ မိဖုရားဆိုတာ ဘုရင်ရဲ့ မိန်းမပဲ။ ဘုရင်ရဲ့ ဦးဆောင်မှု လမ်းညွှန်းမှု အောက်မှာ ရောက်နေတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘုရင်မလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် သူက ဦးဆောင်သူ ဖြစ်သွားတယ်။ သူ့ ယောက်ျားကို သူက ဦးဆောင်မယ်။ သူက ရှေ့ကသွားမယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းဗျာ ဘာပဲပြောပြော ပုထုဇဉ်လူသားတစ်ယောက်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လိုချင်တာကတော့ မိဖုရားပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခုနက ဖိတ်စာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ကျွန်တော်က ဘုရင်နေရာမရောက်ပဲ ဘုရင်မယောက်ျားနေရာ ရောက်နေရတယ်။ အဲဒီတော့ နှိမ်လွန်းတဲ့ လောကကို ကျွန်တော် စိန်ခေါ်လိုက်တာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ဘက်မှာ စကားတစ်ခွန်းပဲ ရှိပါတယ်။ “အိုင်မည်ကာ ကြာမပေါက်” တဲ့။ အိုင်မည်ကာ မတ္တနဲ့ ကြာပေါက်မလာပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီစကားတစ်ခွန်းနဲ့ပဲ လောကမှာ ကျွန်တော်အမြဲခေါင်းမော့နေပါတယ်။ အရင်ကလည်း ခေါင်းမော့နေပါတယ်။ ခုလည်း ခေါင်းမော့နေဆဲပဲ။ နောင်လည်း ခေါင်းမော့နေဦးမှာပါပဲ။
၀င်းကိုကို – ကျေးဇူးပဲ ဆရာ။ ပေါ့ပေါ့ဆဆ ဖိတ်စာရေးတတ်တဲ့ သူတွေအတွက် ဒီသတင်းကျွတ်မှာ ဆရာ့သီချင်းလေးက သတိပြုစရာ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်…။
အဲဒါလေးပါဗျာ။ ၁၉၈၁ အောက်တိုဘာလထုတ် ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါခဲ့တဲ့ ဆရာဝင်းကိုကို နဲ့ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်တို့ရဲ့ အမေးအဖြေလေး တချို့ ပါ။
ဒီတစ်လ ဖတ်မိတဲ့ ကဗျာလေးတွေထဲက ခင်မောင်တိုးကြီး ဆိုဖို့ ကိုရဲလွင်ကြီးက သံစဉ်ထည့်ပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမောင်ဒီ ရဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။ သီချင်းနာမည်လေးက သိန်းငှက်တို့ရဲ့ သဘာဝ တဲ့။
ဆရာမောင်ဒီရဲ့ မူရင်းကဗျာနာမည်က သိန်းငှက်ပျိုတို့ရဲ့ ဘ၀အစ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုနေ၀န်းနီတို့ ကိုကမ်းကြီးတို့ ကိုအလင်းဆက်တို့ ကိုရင်စည်သူတို့ ဖတ်ဖို့အတွက် ပါဗျာ…။
မတန်မရာတွေ လုပ်တယ်တော့ မထင်စေချင်ဘူး ကျောင်းဒကာရေ…။
နောက်တစ်ပုဒ်ကိုတော့ ဂျာမန်ကဗျာ တစ်ပုဒ် ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ဂျာမန်ကဗျာဆရာကြီး ဗားတော့ဗရက်ရဲ့ ကဗျာတွေကို ဆရာတင်မောင်အေး တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ထုတ်ဝေခဲ့ဘူးတဲ့ အနာဂတ်အတွက် ကဗျာ စာအုပ်ထဲက အဆီယစ်နေသူများ ဆိုတဲ့ ကဗျာကို ဖေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်။
ဒီကဗျာအကြောင်း ကို ကျွန်တော် အလင်းတန်းဂျာနယ်ထဲမှာ ဆရာ မောင်ရင့်မာ (ကျောင်းကုန်း) က ဆွေးနွေးထားတာတွေ့လို့ ဖတ်မိပြီး ကြိုက်သွားတာပါဗျာ…။
ကဗျာလေး မဖတ်ခင် ကဗျာဆရာ ဗားတော့ဗရက် အကြောင်းလေး နည်းနည်း ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ…။
ဗားတော့ဗရက်ဟာ ဂျာမန်စာပေလောကရဲ့ ကဗျာက၀ိကြီးပါ။ နာဇီဆန့်ကျင်ရေးနဲ့ ဟစ်တလာရဲ့ တတိယဂျာမနီ နိုင်ငံတောကြီးကို သရော်ခဲ့လို့ ပြည်နှင်ဒဏ် ပေးခံခဲ့ရတယ်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလ၀ါဒကို ဆန့်ကျင်တယ်။ လူထုခံစားမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ရှုမြင်တယ်။
အဆီယစ်နေသူများ ကတော့ ဖြင့် အာဏာနဲ့တွေ့ရင် စည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ တွေ့ရင် မိန်းမူးတတ်၊ မေ့လျော့တတ်သူတွေ၊ ကတိပျက်မြို့ထဲ ၀င်သွားသူတွေ စိတ်ကြီးဝင် မာန်တက်နေသူတွေနဲ့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ အရာရာရဲ့ အထက်က ဘုန်းရှင်ကံရှင်တွေအဖြစ် အထင်ရောက်နေသူတွေ၊ အဲဒီလို လူတွေအတွက် အတိအကျ ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ (ဂျာမန်) ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(မောင်ရင့်မာ – ကျောင်းကုန်း +++ အလင်းတန်းဂျာနယ်)
ကဗျာလေး ကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်ပါ…။
အင်မတန် ခက်ပါတယ် ဆိုပါလားဟေ့ ။ ။
(တင်မောင်အေး ဂျာမန်ဘာသာမှ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုသည်။)
ဆိုတော့ ဒီကဗျာလေး ဟာ ခေတ်အဆက်ဆက်ကိုဖြတ်သန်းပြီး ဒီနေ့ခေတ် နဲ့လည်း အံဝင်လျက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကို
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဆီယစ်နေသူတွေ အများကြီးပါဗျာ…။
အချိန်ပြည့်မီးရ၍ ၀မ်းသာ (ကြေးမုံ)
လူကို ခွေးကိုက်ရင် သတင်းမဟုတ်၊ ခွေးကို လူကိုက်ရင် သတင်းတဲ့…။
အဲဒီလို … ပြောကြတာပဲဗျာ…။
လျှပ်စစ်မီးကျတော့ နည်းနည်း ရှုပ်သွားပြီဗျာ…
မီးလာတာက သတင်းလား…။ မီးမလာတာက သတင်းလား…။
ခေါင်းစားလို့ကောင်းနေတုန်း အချိန်ပြည့် မီးရ၍ ၀မ်းသာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ကြေးမုံသတင်းစာမှာ ပါလာခဲ့ပါတယ်…။ မျက်နှာဖုံးမှာနော် ကျောင်းဒကာ…။ အတွင်းစာမျက်နှာတွေမှာတောင် မဟုတ်ဘူး…။
မီးလင်းနေတဲ့ ဓါတ်တိုင်တွေကိုပါ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ထည့်ပေးထားလိုက်သေး..။ ဟေးဟေး။
သတင်းစာဖတ်သူတွေ မယုံမှာ စိုးလို့ထင့် …။
ကဲ… မူရင်းသတင်းလေး အတိုင်း ပြန်ရိုက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
သတင်းဆိုတာ.. ဒါမျိုးလို့ ရဲရဲကြီး ပြောသာချလိုက်ပေတော့ ဗျို့…။
ရေတာရှည် ဇူလိုင် ၆
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေတာရှည်မြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီပတ်လုံး ရရှိ၍ သုံးစွဲသူများ အဆင်ပြေလျက် ရှိသည်ဟု
သိရသည်။ ရေတာရှည်မြို့နယ်တွင် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ စက်မှုဇုန် အဆောက်အအုံများ၊ လျှပ်စစ်မီးကို အဓိကသုံးစွဲ လုပ်ကိုင်ရသည့်
ဌာနများစွာရှိပြီး ယခင်က လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုကြောင့် အခက်အခဲများစွာဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရသော်လည်း ယခုကာလတွင်
နေ့စဉ် ၂၄ နာရီပတ်လုံး လျှပ်စစ်မီး ရရှိနေပြီဖြစ်သည့်အတွက် ပြည်သူအများ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
အခုအချိန်ထိ မီးလာတာက သတင်းဖြစ်နေသေးတာကိုး…။
ရေတာရှည် သားတွေ ဘယ်လောက်များ ၀မ်းသာလိုက်ကြမလဲ…။
ရန်ကုန်မှာလည်း ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး မပျက်တော့တဲ့အခါ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတဲ့ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန်သားတွေရဲ့ သတင်း စောင့်ဖတ်ကြသေးတာပေါ့ နော့…။
ခင်ဗျာ..။ အခုကို မီးပျက်နေတယ်…။
အော် အနိစ္စ အမြဲမရှိ ဆိုတာ လျှပ်စစ်မီးကို ရည်ရွယ်ထားတာများလား … ။
ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ နိုင်ငံတော် အလံ အလေးပြုသင့် မပြုသင့် (newday)
ရုပ်ရှင်မကြည့်ခင် နိုင်ငံတော်အလံကို အလေးပြုမှု အားနည်းနေကြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းတစ်ခု မေးမြန်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် ကျောင်းဒကာရေ..။
အဲဒီမေးခွန်းကို ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းက ဖြေကြားခဲ့တယ်တဲ့။
အရင်ခေတ်ကာလက ရုံများအတွင်း စည်းကမ်းထိန်းရဲများထားရှိပြီး ရုံပြင်သို့ခေါ်ကာ ဒဏ်ရိုက်အရေးယူခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ဘူးပါသတဲ့…။
အင်း သိတ်တော့ နေရာမကျလှဘူးလို့ ထင်မိတယ်ဗျ…။
စိတ်ပျေလက်ပျောက် ရုပ်ရှင်လာကြည့်ကာမှ နိုင်ငံတော်အလံအလေးမပြုလို့ ရုံပြင်ဆွဲခေါ်ပြီး ဒဏ်ရိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကြီး က
တစ်ပတ်အတွင်းမှာ တစ်ရက်ရက် သတ်မှတ်ပြီး နိုင်ငံသားတွေအားလုံး တစ်ပြိုင်တည်း တစ်ချိန်တည်း အလေးပြုကြရင်ဖြင့် ပိုပြီး နေရာကျမလားလို့…။
အခုလိုကြီးကျတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရုပ်ရှင်မကြည့်တဲ့လူတွေကျတော့ နိုင်ငံတော် အလံကို အလေးပြုဖို့ အခွင့်အရေး မရှိသလိုကြီး ဖြစ်နေတာပေါ့…။
ကျွန်တော်တို့ မန်းဂဇက်မှာလည်း အဲဒီအကြောင်းပို့စ်တစ်ပုဒ်တင်ပြီး အကျယ်တ၀င့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြဖူးတာ မှတ်မိနေကြဦးမှာပါ။
ဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ရုံအတွင်း နိုင်ငံတော်အလံအလေးမပြုရင် အရေးယူသင့် မယူသင့်…ဆိုတာကြီးကိုတွေးရင်း
ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ဆန္ဒရှိကြသလို ပြုမူကြပါစေလို့ ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလား…
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီး ဖြစ်နေမှပဲဟာ …
ဆံပင်ဖြူသူတွေ အတွက် သတင်းတစ်ပုဒ် (ကြေးမုံ)
ဘလက်တို့လို ဆံပင်ဖြူသူတွေအတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်မို့ ၀မ်းသာအားရ ရေးခွင့်ပြုပါ.. ကျောင်းဒကာ။
မရှက်တော့ပါဘူး။ လူသိတ်မသိအောင် အင်တာနက်ထဲ ကြုံတုန်းလေး ၀န်ခံချက်လေး ပေးပါရစေ…။
ဘလက်ကိုယ်တိုင်က ဆံပင်ကို တစ်လတစ်ခါ ဆေးဆိုးနေရတဲ့ ဆံပင်ဖြူနေသူတစ်ယောက်ပါ ခင်ဗျာ…။
ရွာသားမိတ်ဆွေတွေထဲလည်း ဆံပင်ဖြူနေသူတွေ အများကြီးပေါ့ခင်ဗျာ…။
ဘလက် ဆိုတဲ့ ကောင်ကတော့ ၄၀ ကျော်နေပြီဆိုတော့ ဆံပင်ဖြူတာ ဘာအရေးလဲနော့…။
၃၀ ကျော်တွေထဲက အရွယ်မတိုင်မီ ဆံပင်ဖြူနေကြသူတွေကို နည်းနည်းလေး တင်ပြပါရစေ..။
နိုဇိုးမိ ကြီးတို့ လင်းဝေ တို့ဆို အသက် ၃၀ ကျော်လေးတွေနဲ့ ဆံပင်ဆေးဆိုးနေရသူတွေပေါ့…။
တစ်ယောက်က ၃၈ တဲ့။ တစ်ယောက်က ၃၉ တဲ့။ ဟီး
လူငယ်လေးတွေပေမယ့် မတန်မဆ တာဝန်ကြီးတွေကို ထမ်းဆောင်နေရရှာတော့ ခေါင်းအရမ်းသုံးရရှာတယ်လေဗျာ။
နောက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေနဲ့ အရက်အရမ်းသောက်ကြလို့ ဆံပင်တွေ ဖြူနေကြရှာပြီဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေလေး တွေလည်း ရှိသေးသဗျ…။
ဗိုက်ကလေးတို့ အင်ဇာဂီတို့ ရဲစည် တို့ ဝေယံလှိုင်မင်းဆိုတဲ့ အာရ်ဂလေးတို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ…။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ဆံပင်ဖြူကြတာလည်း အံ့သြမနေကြနဲ့ဦး…။
ရေဆာ ဘီအီးသောက်ဆိုတာ အဲဒီကောင်တွေဗျ…။
ဒီအထဲ ဖက်ကက်တို့ ရွှေတိုက်တို့ အမတ်ကြီးတို့ အုပ်စုက သူတို့ ဆံပင်ဖြူနေပြီဆိုတာ ထည့်မရေးပါနဲ့ ဆိုလို့ ထည့်မရေးလိုက်တော့ပါဘူးဗျာ..။
အဲဒီလို လူတွေအတွက် အားတက်စရာ သတင်းလေး လက်တို့ချင်ပါတယ်ဗျာ။
ဗြိတိန် နိုင်ငံ L’oreal ကုမ္ပဏီက ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုအကြာ စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ ဆံပင်ဖြူတာကို ကာကွယ်ပေးမယ့် ဆေးတစ်မျိုးကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီတဲ့ ဗျာ…။ သဘာဝအသီးတစ်ခုက ဖေါ်ထုတ်လိုက်တာ လို့ ဆိုပါတယ်…။
ဒီသတင်း ဖတ်ပြီး ဘဘဘလက် ဘယ်မှာဝယ်လို့ ရမလဲ ဆိုပြီး ဖုန်းတွေဘာတွေ ဆက်မနေကြနဲ့ဦးဗျ…။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကျမှ ဈေးကွက်ထဲ ဖြန့်ချိနိုင်မှာတဲ့ဗျာ…။
ဒီကြားထဲတော့ တစ်လတစ်ခါ ဆေးဆိုးကြပေဦးပေါ့ဗျာ…။
တေးရေးတေးဆို ၀င်းမော် ကွယ်လွန်ခြင်း ( မန္တလေး အာရုဏ်ဦး )
အလင်္ကာကျော်စွာ ရွှေမန်း ဦးတင်မောင်ကြီးရဲ့ မြေး၊
အကယ်ဒမီများရှင် ဦးညွန့်ဝင်း ရဲ့ သား၊
၀င်းဗိုလ်တို့ ၀င်းမောင်တို့ ချမ်းသာတို့ ရဲ့ တူတော်မောင်
ကျော်ကျော်ဗို တို့ တင်မောင်ဆန်းမင်းဝင်း တို့ ရဲ့ အစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲ
STORM AREA တေးဂီတ၀ိုင်းရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် တေးရေးတေးဆို အဆိုတော် ၀င်းမော် တစ်ယောက်
၈-၅-၂၀၁၂ နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားရှာပါတယ်တဲ့ဗျာ။ သတင်းက တော်တော် ကြီးတောင် နောက်ကျနေခဲ့ပါပြီ။
အဲဒီ ၀င်းမော် ကြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တုန်းက တင့်တင့်ထွန်း တောင် နမ်းမှာလား တင့်တင့်ထွန်း မဖြစ်သေးတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ဇာတ်ကားနာမည်တောင် နားစွန်နားဖျား မှတ်မိနေသေး။ အချစ်ရွက်နု တဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ အကယ်ဒမီများရှင် ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးရဲ့ သားက မင်းသားလုပ်ဖို့ ဗီဇက ပါမလာခဲ့ဘူးထင်ပါတယ် ကျောင်းဒကာရယ်။ ရုပ်ရှင်ဘက်မှာ ဖြစ်ထွန်းမလာခဲ့ဘူးပေါ့…။ ခေတ်ပေါ်တေးဂီတဘက်မှာတော့ ပါရမီ ပါတယ်ဆိုရမှာပါပဲ။ တစ်ကိုယ်တော် စီးရီးတွေ ထွက်ခဲ့ပြီး STORM AREA BAND ကို တည်ထောင်ကာ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တချို့ကို မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တေးရေးအနေနဲ့ကတော့ ထူးအယ်လင်းတို့ ဒွန်းတို့ ကို အောင်မြင်တဲ့ တေးများရေးဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ထူးအယ်လင်းရဲ့ အိန်ဂျယ်တယောအခွေက ဒီဆရာ ရဲ့ STORM AREA BAND လက်ထွက်ပါဗျာ။
ကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ ကိုဝင်းမော် ကြီး ကောင်းရာသုဂတိ ကို ရောက်ရှိစေဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုတောင်းပေးကြရ အောင်လား ဗျာ…။
ဖိုးကာ ရဲ့ စတုတ္ထ စီးရီး အိပ်မက် ၁၊ အိပ်မက် ၂ (အလင်းတန်း)
အနုပညာရှင် တော်တော်များများကတော့ အဲဒီ အိပ်မက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးနဲ့ မကင်းကြပါဘူးဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ လေးစားခဲ့ကြတဲ့ ကိုငှက် တစ်ယောက်တောင် အဲဒီ အိပ်မက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြီးကို ပျော်ပျော်ကြီးသုံး ခဲ့ဘူးပါတယ် ကျောင်းဒကာ..။
မှော်ဆရာ အိပ်မက် တဲ့။
အကြင်နာ အိပ်မက် တဲ့။
အိပ်မက်ထဲက ရထားကြီး တဲ့။
သီချင်းတွေထဲ ထည့်ရေးခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေဆိုတာကတော့ အများကြီးပေါ့ဗျာ။
လေးဖြူကလည်း အိပ်မက် မီးရထား တဲ့။ အိပ်မက်ကဗျာ တဲ့။
ဇော်ဝင်းထွဋ် နဲ့ ရင်ဂိုကြီးတို့ကလည်း နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အိပ်မက်လမ်း…တဲ့။
ဂျေမောင်မောင်ကြီးက ပက်ထရစ်ဆိုဖို့ရေးပေးခဲ့ဘူးတယ်…။ အိပ်မက်မက်တယ် ဆိုတဲ့ သီချင်း…။
နိုင်မြန်မာကြီးက စိုးလွင်လွင်ဆိုဖို့ ရေးပေးခဲ့ဘူးတယ်…။ အိပ်မက်ကောင်းစဉ် မိုးမလင်းချင်.. တဲ့။
ချစ်ကောင်းကြီးဆိုဖို့ ၀င်းမင်းထွေးရေးပေးခဲ့တဲ့ အိပ်မက်ဝိုင် ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။
အိပ်မက်ကို ၀ိုင်လုပ်ပြီးသောက်ဖို့တောင် အကြံကြီးကြသူတွေ ခင်ဗျ…။
အဲဒီလောက်တောင် အိပ်မက်ကို ကြိုက်ကြတာ… အံ့ရော။
အခု တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး တစ်စိမ့်စိမ့်ကြည့် တယ်ဆိုတဲ့
အဆိုတော် ဖိုးကာရဲ့ စတုတ္ထမြောက်စီးရီးတိုင်တည် က အိပ်မက် ၁၊ အိပ်မက် ၂ တဲ့ဗျာ။
နေရာကျသွားရင် အိပ်မက် ၃၊ အိပ်မက် ၄ ဆိုတာတွေ ခပ်တည်တည် ဆက်ထုတ်ကြတာပေါ့…။
အိပ်မက် ၁၊ အိပ်မက် ၂ လို့ အမည်ပေးထားရတာက အိပ်မက် ၁ ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ အိပ်မက် ၂ ဆိုတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ရဲ့ အမည်ကိုပေါင်းပြီး စီးရီး တိုင်တယ် ပေးထားတာပါ လို့ ဖိုးကာက ဆိုပါတယ်တဲ့ …။
တေးရေးတွေက အငဲ၊ မင်းချစ်သူ၊ ဂျေမောင်မောင်၊ ဒီထဲလ်ဒီ နဲ့ ဖိုးကာ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကော်ပီသီချင်း ၄ ပုဒ်နဲ့ ကျန်တာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
The Trees အဖွဲ့က ပင်တိုင် တီးခတ်ပေးထားပြီး ဧည့်သည်အနေနဲ့ Lazy Club နဲ့ Magic Teen အဖွဲ့တွေက ပါဝင်တီးခတ်ပေးထားပါတယ်တဲ့။
ဖိုးကာက တစ်ကိုယ်တော် အခွေ အထွက်ကျဲပါတယ်။
အခု ခင်ဗျားတို့ကို အိပ်မက်ပေးမလို့တဲ့…။
အိပ်မက် ၁၊ အိပ်မက် ၂ တဲ့။
အ၀သာ မက်ကြပေတော့ ကျောင်းဒကာတို့ရေ…။
တွတ်ပီ IDIOTS ရဲ့ အမေ့ အတွက် ကဗျာ (OASIS)
ထွန်းအိန္ဒြာဗို ရယ်၊ ကော်နီရယ် ခင်မြတ်မွန်ရယ် NEW WAVE တေးဂီတအဖွဲ့ရယ်… ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိခဲ့ဘူးတာ မှတ်မိကြဦးမှာပေါ့…။
အဲဒီအထဲက ကော်နီ ကတော့ စောစောစီးစီး တာဇံစီးရီးနဲ့ စူပါတန်းဝင် အဆိုတော် စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး ဒီနေ့အထိ ဂီတလောကမှာ ရပ်တည်နေဆဲဆိုတာ အားလုံး သိကြမှာပါ…။ ဒီနေ့အထိ အပျိုကြီး ဘ၀က တစ်ပြားမှကို မလျော့သေးဘူးတဲ့ ကျောင်းဒကာရေ…။ နှမြောစရာကြီးဗျာ ဟေးဟေး…။
မိမိခိုင် ခေါ် ထွန်းအိန္ဒြာဗို ကတော့ အောင်မြင်တဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ပြီးမှ အဆိုတော်တန်းမှာ ဒီနေ့အထိ စူပါတန်းဝင် အဆိုတော် ဘ၀ကို ထိန်းထားနိုင်ဆဲ ဆိုတာလည်း ခင်ဗျားတို့ သိကြမှာပါ…။ သူကတော့ အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ထူထောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီတဲ့ဗျာ…။
သူမကျတော့ စီးရီးတွေဘာတွေတော့ ထွက်တယ်ပေါ့နော်…။ ဒါပေမယ့် သိတ်မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးပေါ့…။
သို့သော် LIVE SHOW တစ်ချို့မှာ ဟာမိုနီ လိုက်နေတာတော့ မကြာမကြာ တွေ့နေရလေရဲ့…။
သူမကတော့ ပထမ အိမ်ထောင်ဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော်တိုင်းရင်းသားတေးရေးတစ်ယောက်နဲ့ ကွဲ…။
တွတ်ပီ ဆိုတဲ့ သားလေးလက်ကိုဆွဲပြီး ဘ၀ကို ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့…။
နောက်ထပ် အိမ်ထောင်တစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့ပြန်တော့ အိမ်ထောင်ဘက်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့…။
နောက်အိမ်ထောင်နဲ့ လပြည့်ကဗျာ ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့…။
အခု အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ သား တွတ်ပီ IDIOTS က သူ့အမေ ခင်မြတ်မွန်ကို ကရုဏာစကားလေး တစ်ခွန်းဆိုရှာတယ်…။
ဖတ်ပြီး ကျွန်တော် ကြေကွဲသွားတယ်…။
အမေ့ကို တစ်ခါလောက် လင်ကောင်းသားကောင်းရစေချင်တယ်
အဲဒီစကားလေးကပဲ ကဗျာတစ်ပုဒ် ဖြစ်လို့ နေလေရဲ့ ….။
Sexy Pose တွေ မရိုက်ချင်တော့ဘူးလို့ ပြောလာတဲ့ အေးမြတ်သူ (နံနက်ခင်း)
စကားလမ်းကြောင်းကို အေးမြတ်သူ လေး ဘက်လှည့်မလားလို့ဗျာ…။
ဆွေလှိုင်ဦးရဲ့ ၀တ္ထုကို ဒါရိုက်တာ သီဟကျော်စိုး ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းခဲ့တဲ့ ဂျက်မ ဇာတ်ကားကို ခင်ဗျား မှတ်မိဦးမှာပေါ့။
အရင်က ကျော်ဟိန်း နဲ့ ခင်သန်းနု ကြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာလေ။
အဲဒီခေတ်က ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ တိုးမပေါက်အောင် အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးပေါ့။
ဂျက်မအဖြစ် သရုပ်ဆောင်တဲ့ ခင်သန်းနု ကြီးရေကူးဝတ်စုံ ၀တ်ပြလိုက်တော့ အဲဒီအချိန်က မဆလခေတ်မှာ အထူးအဆန်းကြီးတွေ ဖြစ်လို့။ ဘာမှလည်း လောက်လောက်လားလား ပေါ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ ဗျာ…။
ဆိုတော့ အဲဒီ ဂျက်မဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ သီဟကျော်စိုးကပဲ ကျော်ဟိန်းရဲ့တူ နေမင်း နဲ့ ဒီဗီဒီ ပြန်ရိုက်တော့ ဂျက်မအဖြစ် အေးမြတ်သူလေး က သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါမှ ဒီဗီဒီ ကို ရုံထဲသွားမကြည့်ဘူးခဲ့တဲ့ ဘလက်တစ်ယောက် အဲဒီကားကိုတော့ အရမ်းအရမ်း စွဲဆောင်အားကောင်းတာကြောင့် ရုံထဲရောက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ အော် Sexy, Sexy…။
ဟိုခေတ်က ခင်သန်းနု လန်းခဲ့တယ် ဆိုတာ ဘာဟုတ်သေးလဲ…။
အေးမြတ်သူ အိပ်နေသလောက် ရှိတယ်။
ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ အေးမြတ်သူလေးရဲ့ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် အသွယ်သွယ်ကို ဒါရိုက်တာသီဟကျော်စိုးကြီးကလည်း
သူ့ခေတ်နဲ့သူ့အခါ အလှအပဆိုတာ ဖေါ်ထုတ်ပေးသင့်တဲ့ ကိစ္စပဲ…နော့။
ရေထဲမှာ နေမင်းနဲ့ ချစ်ရည်လူးခန်းဆို အသက်ဝင်လွန်းလို့ တက် တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ပေါ့။
ဟော အခု အဲဒီ Sexy မင်းသမီးလေး အေးမြတ်သူက
Sexy Pose တွေ မရိုက်ချင်တော့ဘူးတဲ့ဗျာ။
အားပေးနေကြသူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမှ မထောက်…။
Sexy Pose က မရိုက်ချင်တော့တာ။ အဲဒါက အသက်နဲ့လည်း ဆိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ ၂၅ နှစ်ကျော်လာတဲ့ အခါ တည်ငြိမ်သွားတယ်။ ယဉ်တယ်၊ လှတယ် ဆိုတဲ့ အလှမျိုးပဲ လိုချင်တော့တယ်။ ဒါကြောင့်ပါ
စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ မင်းသမီးရယ်…။
ယဉ်ရုံ လှရုံ နဲ့ အလုပ်ဖြစ်တဲ့ ခေတ်က ကျန်ခဲ့ပြီ ကွဲ့…။
ဘဘ ဘလက်တို့က Sexy မဖြစ်လို့ကတော့ လှည့်ကြည့်လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဒီနေရာက ကြိုတင်သတိပေးလိုက်ပါရဲ့ဗျာ…။
အော် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ။
ချမ်းမီမီကိုလေး အူအတက်ပေါက်လို့တဲ့ (Sunday)
ရင်ထဲ မကောင်းလိုက်တာ ကျောင်းဒကာရယ်…။
ချမ်းမီမီကိုလေး အူအတက်ပေါက်လို့ GREEN CROSS ဆေးရုံမှာ တက်ပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူရတယ်တဲ့…။
ဒီအူအတက်နှယ် ဟိန်းဝေယံတို့ မင်းမော်ကွန်းတို့လို ယောက်ျားရင့်မကြီးတွေကိုတော့ မတိုက်ခိုက်ပဲ ချမ်းမီမီကို လို အလှလေးကိုမှ တိုက်ခိုက်ရတယ်လို့…။
ခေး ရဲ့ ဗိုက်သားချပ်ချပ်ရပ်ရပ်လေးမှာ အမာရွတ်ကြီးထင်နေတော့မှာပဲကွယ်…။ နှမြောထှာ…။
ဗိုက် ခဏခဏအောင့်နေတာ။ အူအတက် ဖြစ်နေတာတော့ သင်္ကြန်ပြီးကတည်းက သိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အလုပ်တွေ များနေလို့ အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ အခုကျတော့ အခြေအနေက ဆိုးလာတာနဲ့ ဆေးရုံတက်ပြီး ခွဲစိတ်လိုက်ရတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းတော့ ကားရိုက်တွေဖျက်လိုက်ရတယ်။ ဆေးရုံက ဆင်းမှပဲ မဟော်ဂနီထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ဇာတ်ကား ပြန်ရိုက်ဖြစ်မယ်
အမေ က ပြောသွားပါတယ်ဗျာ…။
ညှာညှာတာတာ ခိုင်းပါ အမေရယ်…။
ဆေးရုံက ဆင်းတာနဲ့ ဇာတ်ကားပြန်ရိုက်မယ်ဆိုတာကိုတော့ ရင်ထဲမကောင်းလှပေဘူးဗျာ…။
(မှတ်ချက်။ ။ အမေ ဆိုသည်မှာ ချမ်းမီမီကို လေးရဲ့ အမေကို ဆိုလိုပါသည်…။
ဒီလိုပဲ… ကြုံတုန်း အသားယူရတာပဲဗျာ…။)
ဟိုတုန်းက Sexy ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အေးအေးသင်း (နံနက်ခင်း)
ကျွန်တော်တို့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ခပ်ငယ်ငယ်က မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ အင်မတန် Sexy ဖြစ်ခဲ့သော ဗီလိန်မင်းသမီးတွေ တော်တော်များများ ရှိခဲ့ပါတယ် ကျောင်းဒကာရေ..။
ပပလင်းတို့၊ စန္ဒယားခင်နုနုတို့၊ ခင်စိုးပိုင်ကြီးတို့ စသည်ဖြင့် ပေါ့လေ။
သူတို့ခေတ်တုန်းက သူတို့တတွေ ဘယ်လောက် Sexy ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ၄၀ ကျော်ကြီးတွေ သိကြပါတယ်ဗျာ…။
အဲဒီအထဲ မဖြစ်မနေ စာရင်းသွင်းရမယ့် တစ်ယောက်ကတော့ အေးအေးသင်း ပါပဲ ဗျာ။
အေးအေးသင်းကြီး ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ အငယ်အနှောင်းခန်းတို့ မင်းသားကို မြှူဆွယ်ရတဲ့ အခန်းတို့မှာ ဘယ်လောက် Sexy ဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သူကြီးတို့ အရွယ်ကြီးတွေ သိခဲ့မှာပါ…။
အဲဒီအေးအေးသင်းကြီး ကို ရုပ်ရှင်တွေမှာလည်း မတွေ့တာကြာ၊ စာစောင်တွေမှာလည်း သတင်းတွေမဖတ်ရတာ တော်တော်ကြာ ခဲ့ရာက နံနက်ခင်းဂျာနယ်ထဲမှာ အေးအေးသင်း နဲ့ အင်တာဗျူး ပါလာခဲ့ပါတယ်ဗျာ…။ ကျေးဇူးပါ နံနက်ခင်း ဆရာတို့ရေ…။
အဲဒီ အေးအေးသင်းကြီးကလည်း အနုပညာလုပ်ခွင့်ကို လူမသိသူမသိ အပိတ်ခံခဲ့ရတာပါတဲ့။
ဒို့အရေးထဲ ပါခဲ့လို့ ဆိုလား…။
အော် ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ မပါမဖြစ် မင်းသမီးမဟုတ်တော့လည်း လူတွေက သိတ်သတိမပြုမိခဲ့ကြဘူးပေါ့…။
အခု ဒေါ်အေးအေးသင်းကြီးက မှော်ဘီ မှာ ဗေဒင်ဟောနေပါတယ်တဲ့။
ကိုရင်စည်သူနဲ့ ဆရာတူ မောင်နှမတွေတဲ့နော်…။ အဘမင်းသိင်္ခတပည့်တဲ့ဗျ…။
ဗေဒင် ၀ါသနာပါတဲ့ မပဒုမ္မာတို့ မမ တို့ သွားကြည့်ကြဖို့ လက်တို့လိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
အေးအေးသင်းကို အင်တာဗျူးထားတာလေးတွေထဲက စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တာလေးတွေ ရွေးထုတ်ဖေါ်ပြပေးပါရစေ…။
မေး။ ။ ဆရာမကို အနုပညာလုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်ချက်ကို ဘယ်လိုစသိခဲ့ရတာလဲ။ အဲဒါလေး အမှတ်တရ ပြောပြပါလား…။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကလေ။ မအေးပါတဲ့ ကားပေါ့။ ရိုက်ဖို့အားလုံး စီစဉ်ပြီး ဇာတ်လမ်းတင်လိုက်ရင် ဒီဇာတ်က မကျတော့ဘူး။ အဲဒါ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ကာလတစ်လျှောက်မှာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ခံစားရတာကိုတော့ ဘာနဲ့မှ နှိုင်းလို့မရပါဘူး။ မအေးက အနုပညာကို သေမလောက်ဝါသနာပါခဲ့တာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဒီအလုပ်မလုပ်ရဘူးဆိုတော့ ငါ့လက်တွေ ခြေထောက်တွေကို ရိုက်ချိုးပစ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ငါ့ နှလုံးသားနဲ့ ငါ့ဝိညဉ်ဟာ ပရသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေတာပဲ… ရတယ်။ နေပါစေ။ မလုပ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် မြေပဒေသာကျွန်းမှာ လုပ်တဲ့ပွဲမှာတော့ ခေါ်ပါတယ်။ သီးနှံတွေ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကပြရမှာတဲ့…။ အဲဒီသီးနှံပုံကြီးစွပ်လိုက်ရင် အေးအေးသင်းမှန်း ဘယ်သူမှန်း မသိတော့ဘူးလေ။
ပြီးတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးစန်းပွင့်ကရော၊ ကိုအောင်လွင်ကရော လက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါ ပြောကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုအောင်လွင်က ဒေါ်စုခြံထဲမှာ ရှိနေသေးတယ်။ မအေးတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒို့အရေးကြောင့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေက ဆေးရုံကြီးမှာ ထပ်နေတာ။ အဲဒါတွေ မြင်နေရတဲ့အခါ ဘာလက်မှတ်မှ မထိုးချင်တော့ဘူး။ ကိုအောင်လွင်တို့ကတော့ ရုပ်ရှင်လေး ဘာလေး ပြန်ရိုက်ရအောင်လို့ ပြောပေမယ့် မလုပ်တော့ဘူး။ အိမ်ထောင်နဲ့လည်း ကွဲသွားတော့ ဒီအတိုင်းပဲ နေပြီး ဗေဒင်ဆရာမဘ၀နဲ့ပဲ အသက်မွေးပါတယ်…။
ဒို့အရေးလုပ်ခဲ့မိတဲ့ အနုပညာသမားတစ်ယောက်ကို လူမသိသူမသိ အနုပညာလုပ်ခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ သမိုင်းလေး သိရတယ်ပေါ့ဗျာ…။
အေးအေးသင်းကြီး ဘယ်လောက်တောင့်ခဲ့ ဖြောင့်ခဲ့ ထွားခဲ့ ကျိုင်းခဲ့သလဲဆိုတာ ဒီအမေးအဖြေလေး ဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ် ကျောင်းဒကာရယ်။ ပြောမှားဆိုမှားရှိရင် ကန်တော့ပါ အန်တီအေးရေ…။
မေး။ ။ အဲဒီခေတ်မှာလည်း အတုသုံးရတဲ့ မင်းသမီးတွေရှိတာပေါ့…။
ဖြေ။ ။ ရှိပါတယ်။ မအေးကတော့ အစစ်အပြင် အပြင်မထွက်အောင် မနည်းချုပ်ထားရတယ်။ လူကြီးတွေက ရင်ဘတ်က လက်လေးလုံးအောက် အင်္ကျီရောက်သွားတာနဲ့ ဆူတော့တာပါပဲ။ ပြီးရင် အဲဒီအခန်းဖြတ်ဆိုတာပါပဲ…။
ဒေါ်အေးအေးသင်းကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း ချစ်ခင်တဲ့ အကြောင်း၊ ဆရာမင်းသိင်္ခမရှိတော့လို့
အယူတော်မင်္ဂလာခြံကြီး ပြိုကျ ပျက်စီးသွားသလို ဖြစ်သွားမှာလည်း ကြောက်တဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောသွားပါတယ် ဦးလေးရေ..။
စစ်အစိုးရလက်ထက်က ပညာပြ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရလို့ အနုပညာဘ၀သေခဲ့ရရှာတဲ့ ဒေါ်အေးအေးသင်းကြီးတစ်ယောက် သက်ရှည်ကျန်းမာ ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုတဲ့ ၀တ်လစ်စလစ် ကက်သရင်းဇီတာဂျုံးစ် (8 Days)
ဒီတစ်ပတ်လည်း ထုံးစံအတိုင်း အပျင်းပြေ ဟောလိဝုဒ်ဘက်လှည့်ကြဦးစို့…။
အခုတလော ဘလက်တစ်ယောက် ဟောလိဝုဒ် မင်းသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ရေချိုးခန်းထဲက
၀တ်လစ်စလစ် ပုံကြီးပဲ မြင်မြင်နေလို့ ကယ်နိုင်မယ်ဆို ကယ်ကြပါဦးဗျာ…။
အဲဒီ မိန်းမရဲ့ အလှက အပျင်းစား ရမ္မက်ထန်စေတဲ့ အလှတော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ။
ဆိုကြပါစို့… ဂျေလိုကြီးတို့လို ထွားထွားကျိုင်းကျိုင်း လုံးကြီးပေါက်လှ စာရင်းထဲ မပါပါဘူး။
ဂျက်စီကာအယ်လ်ဘာလေး တို့လို ဇွတ်အတင်းကြီး သွေးဆောင်တတ်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်မျိုးတွေလည်း မရိုက်ဘူးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ စွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ အလှပိုင်ရှင် တစ်ယောက်ပါ။
မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ်စ် ကြီးရဲ့ ချစ်ဇနီး။ ကလေး ၂ ယောက်အမေ ကြီးနော်…။
မိုက်ကယ်ဒေါက်ကလပ်စ် ကြီးကို အရမ်းခိုက်တယ်ဆိုပဲ…။ သူ့ဒေါသနဲ့သူပေါ့ နော့…။
လိင်တူချစ်သူကြီးများလား မသိ… ။
အဲဒီ မိန်းမကြီးက ဘာတွေ စိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိပါဘူးဗျာ။
အင်တာနက်ထဲက ညစ်ညမ်း ၀က်ဆိုက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စကားတစ်ခွန်းပြောသွားပါတယ်။
အင်တာနက်ထဲက ညစ်ညမ်း ၀က်(ဘ်) ဆိုက်တွေကို ကျွန်မဖွင့်မကြည့်ဘူး။
ကျွန်မရဲ့ ၀စ်လစ်စလစ် ပုံကို ဘာလို့ ပိုက်ဆံပေး ကြည့်ရမှာလဲ…။
ကျွန်မရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားပြီး ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်လိုက်ရင် အလကားကြည့်လို့ရတယ်။
ရေချိုးခန်းထဲက ၀တ်လစ်စားလစ် ကက်သရင်းဇီတာဂျုန်းကြီးပဲ မြင်မြင်နေလို့ ကယ်နိုင်မယ်ဆို ကယ်ကြပါဦး
မဉ္ဇိမလှိုင်း တေးဂီတ အဖွဲ့ရဲ့ ဘေ့စ် ဂစ်တာသမားကြီး၊
ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတွေကို ဖန်တီးနေတဲ့ တေးရေးတစ်ဦး
စတဲ့ အံ့မခန်း ဂုဏ်ပုဒ်တွေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး မနက်စောစောပိုင်းတွေမှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်းက လဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ လိုက်လံ ဖျော်ဖြေပြီး အလှူငွေ ကောက်ခံပါတယ်တဲ့…။
ရန်ကုန်မှာတင်မဟုတ်ဘူးတဲ့၊ နယ်မြို့တချို့ကိုလည်း ရောက်ပါတယ်တဲ့…။
အဲဒီလို ဖျော်ဖြေပြီး ရရှိလာတဲ့ အလှူငွေ ကျပ် သိန်း ၁၈၀ ကျော်ကို လက်ရှိ ရခိုင်ဒေသ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း များအား ဦးဆောင်ကူညီပေးနေသည့် ဒေါက်တာကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီး)သို့ ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့က လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီ ကိုရဲလွင်ကြီးတို့ အဖွဲ့နာမည်က လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရဲ့လမ်း လူမှုကွန်ယက် တဲ့။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ ကိုရဲလွင်ကြီးရေ။
စာရေးဆရာ မင်းကိုနိုင် (First Weekly)
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အသိအမြင်တွေကို ဂျာနယ်တွေမှာ ကဗျာလေးတွေ ဆောင်းပါးလေးတွေ အဖြစ် မကြာမကြာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီအထဲ ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ကဗျာလေးတွေ က ထူးခြားထင်ရှားပါတယ်။ ဖတ်လို့လည်း အတော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာ။
အခု အဲဒီ ဆရာ… မင်းကိုနိုင်က နောက်ကြည့်မှန်ဆိုတဲ့ လုံးချင်းဝတ္ထုထုတ်မလို့တဲ့ဗျာ။ ၁၅-၇-၂၀၁၂ နေ့မှာ အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲနဲ့ စာအုပ်စတင်ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်မှာပါတဲ့။ ဂျာနယ်ထဲမှာ အခန်းဆက် အဖြစ်ပါခဲ့တဲ့ နောက်ကြည့်မှန် ၀တ္ထုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်က
ဂျာနယ်မှာပါကတည်းက စွဲစွဲမြဲမြဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဇာတ်လမ်းအစကနေ အဆုံးအထိ ဆွဲဆောင်ခေါ်သွားတဲ့ ဇာတ်အိမ်ကြီးက အကြီးကြီးပဲ။ ရင်ထဲတော်တော် ထိရှမိတယ်။ ရုပ်ရှင်အဖြစ်အဲဒီဝတ္ထုကို အသက်သွင်းသင့်တယ်
လို့ ပြောသွားပါတယ်တဲ့ ကျောင်းဒကာရေ။
မင်းကိုနိုင်ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ၀ယ်လိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာဝင်းထွန်းထွန်း (HELLO)
အပေါ်က မင်းကိုနိုင်ရဲ့ နောက်ကြည့်မှန်ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ ၀ယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ ၀င်းထွန်းထွန်းရဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ် လေး ဖတ်ကြည့်ကြပါဗျာ။
ကိုယ်လေးစားအားကျခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာဖန်တီးမှုကို သူ့ကို ချစ်ခြင်းအားဖြင့် အနုပညာအရ ဂုဏ်ပြုတာပါ။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ် အမျိုးအစားလေးကတော့ ၈၈ ၀န်းကျင်က တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ Life နဲ့ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့က ဘူတာရုံလေးနားမှာနေတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလေးပေါ့။ အဓိက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ကိုယ်က တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင် စာသင်ခန်းထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်မနေသင့်ဘူး ဆိုပြီး သူတို့ခေတ် သူတို့ ကာလလေးမှာ ဘယ်လိုတွေ စဉ်းစားခဲ့တယ်၊ ဘယ်လိုတွေ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာလေးတွေလည်း မြင်ရမှာပေါ့။
ဘယ်အချိန်အကောင်အထည်ဖေါ်ရမယ်ဆိုတာတော့ မစဉ်းစားရသေးပါဘူး။ လူတွေကတော့ အရမ်းပြောနေကြတယ်ပေါ့။ ဆင်ဆာတွေလွတ်လပ်သွားပြီ လွတ်လပ်သွားပြီ ဆိုပြီးတော့ တကယ်ရိုက်ကြည့်တဲ့ အချိန်ကျမှ သိရမယ်။ တကယ်တမ်းရိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း ရန်ကုန်ပင်မတက္ကသိုလ်ထဲမှာ ရိုက်ရမယ့် ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေလည်း ရှိတယ်ပေါ့။ ဒါလေးတွေကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကရော ခွင့်ပြုပေးနိုင်မလား။ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကရော ဘယ်လိုတွေ အကူအညီပေးနိုင်မလဲ။ အဲဒါလေးတွေကတော့ အများကြီးလုပ်ရဦးမှာပါ။ သရုပ်ဆောင်ကတော့ မရွေးချယ်ရသေးပါဘူး။ တော်တော်များများ ဒီဇာတ်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေ ရှိပါတယ်။ အဓိကလိုက်ဖက်မှုထက်ကို စိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့ အချိန်ပေးနိုင်မှုပဲ ရှိပါတယ်။ သာမန်ကားတစ်ကားလို သာမန်ရိုက်ရင်တော့ သာမန်ဇာတ်ပဲ ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ကိုယ်က ဒီဇာတ်ကို အရမ်းတန်ဘိုးထားတဲ့အတွက် တန်ဘိုးရှိတဲ့ ဇာတ်တစ်ခုကို ဖန်တီးတဲ့အခါ တန်ဘိုးရှိအောင် လုပ်ရမှာပေါ့
ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ စာရေးဆရာမင်းကိုနိုင် ရဲ့ နောက်ကြည့်မှန် ၀တ္ထုဟာ ရုပ်ရှင်ဖြစ်ဖို့ ကြာဦးမယ်လို့ ထင်ရပါကြောင်း…။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မှ ပါတီဝင် ၅၀ ကျော် နှုတ်ထွက်သည်ဆိုသည် မှာ လွဲမှားမှုများရှိနေ (EMPIRE)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒေါပုံမြို့နယ် ရဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင် ၅၄ ယောက်နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကြောင့် နှုတ်ထွက်သလို ဖြစ်သွားကြတာတွေလည်း ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တဲ့ ပါတီဝင် ၅၄ ဦးရှိသည်ဟု ဆိုသော်လည်း အမှန်တကယ်ထွက်လိုခြင်းကြောင့် လျှောက်ထားကြတာမဟုတ်ပဲ ထောက်ခံလက်မှတ် ထိုးပေးရာမှ တစ်ဆင့် နှုတ်ထွက်သူများ စာရင်းမှာ ပါသွားကြတာလည်း ရှိနေတဲ့အတွက် ဒေါပုံမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိးပါတီမှ ပြန်လည် စိစစ်ပေးသွားပါမယ်တဲ့။
အော် မနှုတ်ထွက်ဘူးဆိုတော့ လည်း ပြန်လက်ခံလိုက်ရုံပေါ့ ကျောင်းဒကာရယ်။
တစ်ည ခေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ ဗကသ ကျောင်းသားများ (INDEPENDENT)
ဒီသတင်းကတော့ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်တဲ့ သတင်းကြီးဗျ။
ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့မှာ7July အထိမ်းအမှတ်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ရွှေဘိုမြို့များမှ ဗကသ အဖွဲ့ဝင်တွေကို တစ်ညတာ ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှ ကိုဒီငြိမ်းလင်း၊ ကိုစည်သူမောင်၊ မဖြိုးဖြိုးအောင် နှင့် ကိုရဲမြတ်ဟိန်း တို့ကို ဇူလိုင် ၆ ရက် ည ၉ နာရီ အချိန်က ထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ ဇူလိုင် ၇ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီမှာ ရန်ကုန်ဗကသ အဖွဲ့ဝင်တွေ ကို ပြန်လည်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင်က အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့။
ကျွန်တော် ဒီမျိုးဆက်ကို ယုံပြီးသားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီမျိုးဆက်ဟာ ကျွန်တော်တို့လို အင်မတန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ အခြေအနေတွေကို ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ ဖြတ်သန်းမှုဟာ ကျွန်တော်တို့ထက်တိုပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေ အတွေ့အကြုံတွေဟာ အရင်ကတည်းက ကြုံခဲ့ဖူးကြလို့ ဘယ်လိုခြိမ်းချောက်မှုတွေ ကြုံခဲ့ရပေမယ့် သူတို့အတွက် မမှုတော့ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ရပ်တန့်သွားအောင် သူတို့ရေးထိုးထားတဲ့ ကျောင်းသားသမိုင်းတွေ ရပ်တန့်သွားအောင် ဘယ်လိုအင်အားမျိုးနဲ့မှ ဟန့်တားလို့ မရပါဘူး။ သူတို့အောင်ပွဲခံနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာ အစောကြီးကတည်းက ကျွန်တော် ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးသားပါ။ သူတို့ကို တိုက်ပွဲထဲ ဆွဲမသွင်းပါနဲ့ လမ်းမပေါ် မထွက်ခိုင်းပါနဲ့ ကျွန်တော့်တူ၊ တူမတွေက ကဒေါင်းတွေပါ။ တွန်ကြကကြပြီးတော့ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးသမားတွေအဖြစ် အစွမ်းပြတာကို မုဒိတာ ပွားကြပါ။ လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သိနိုင်ပါစေလို့ သူတို့ကို ဒီနေရာက ပြောချင်ပါတယ်
ဒီလို ဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလည်း နောက်ထပ်မလုပ်ဖို့ကို လွှတ်တော်ထဲ ဆွေးနွေးသင့်ရင် ဆွေးနွေးကြဖို့ ဒီနေရာကနေ ၀င်အာချောင် လိုက်ပါရစေ ကျောင်းဒကာရေ…။
လူအချင်းချင်း ဖမ်းဆီးခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေပေါ့ဗျာ…။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် (STREET VIEW)
ဇူလိုင်လထဲမှာ အားလုံးကို အံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ ပီတိဖြစ်စရာ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌကြီး ဦးရွှေမန်းနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ တွေ့ဆုံခဲ့ကြခြင်း ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုတုန်းက တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဘ၀နဲ့ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေရဲ့ ရန်သူကြီး ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့
ဦးရွှေမန်းရဲ့ အပြောင်းအလဲအချိုးကွေ့တစ်ခုကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီးတွေ့လိုက်ရတာပါပဲ။ ဦးရွှေမန်းနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေကတော့ မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုပြုံးချို၊ ဂျင်မီ၊ အံ့ဖွယ်ကျော်၊ ကိုမြအေး တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို တွေ့ဆုံဖို့ စီစဉ်ပေးခဲ့သူကတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တွေ့ဖြစ်ဖို့ တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့။ သူတို့ ပြင်ပကို အကျဉ်းကျဘ၀ကနေ လွတ်လာပြီးကတည်းက သူတို့ တိုင်းပြည်အပေါ်ထားတဲ့ စေတနာတွေ သူတို့လုပ်ဆောင်မှုတွေ ဒါတွေကို နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုသင့်တယ်။ သူတို့ကလည်း တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ အင်မတန်မှ အားသွန်ခွန်စိုက်နဲ့ လုပ်ဆောင်လိုကြတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံတော်ဘက်ကနေ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ဥပဒေပြုရေး အာဏာတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ လွှတ်တော်အနေနဲ့ တွေ့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် သူတို့ကို တွေ့ဖို့အတွက် ဥက္ကဌကြီးကို သုံးကြိမ်သုံးခါခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။ ဥက္ကဌကြီးက ခွင့်ပေးတဲ့အခါ တွေ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။
လို့ ဦးခိုင်မောင်ရည်က ပြောပါတယ်ဗျာ။
ဒီတွေ့ဆုံခြင်း အစီအစဉ်မှာ ဥက္ကဌကြီး ဦးရွှေမန်းက ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကို ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းက တော်တော်လေး ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။
အမာရွတ်လေးတွေ ရှိရင် အဲဒီ အမာရွတ်လေးတွေကို သင်ခန်းစာအဖြစ် မှတ်ယူပြီးတော့မှ အားလုံးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြရအောင်
ဒီစကားထဲမှာ မာယာတချို့ရောပြွန်းနေမှာဖြစ်ပေမယ့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲက တကယ်လာတဲ့ စကားလို့ ယုံပေးလိုက်ကြရအောင်ဗျာ…။
မင်းကိုနိုင် ကို အင်တာဗျူးခြင်း (STREET VIRW)
ဇူလိုင် ၉ ရက်ထုတ် Street View ဂျာနယ်ပါ
ဆရာမ သင်းသင်းသာရဲ့ မင်းကိုနိုင် နဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေထဲက ဖတ်သင့်တယ်ထင်တာလေးတွေ ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မေး +++ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းကို ဘယ်လို မြင်ခဲ့ပါသလဲ။
ဖြေ +++ တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက်တုန်းက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းထက်စာရင် အခု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းဟာ အရပ်သားတစ်ယောက်အဖြစ် ပြည်သူလူထုနဲ့ ပိုပြီးနီးစပ်လာတယ်လို့ မြင်တယ်။
မေး +++ လွှတ်တော် ဥက္ကဌနဲ့ တွေ့ဆုံပြီးနောက် ရလဒ်တစ်ခု ထွက်ခဲ့သလား။
ဖြေ +++ ထွက်ပါတယ်။ အားလုံးတူညီတဲ့ အချက်က နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားမယ့် ကိစ္စအားလုံးမှန်သမျှ သတိကြီးကြီးနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းကာကွယ်ကြရမယ်။ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရုံနဲ့ ဒီအတိုင်းငြိမ်နေလို့မရဘူး။ ရှေ့ကိုတိုးဖို့လည်း လုံလောက်တဲ့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ခရီးဆက်နိုင်အောင် အားလုံးအားစိုက်ကြရမယ် ဆိုတဲ့… ရလဒ်ကို ရခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဦးဌေးဦးတို့ပြောတဲ့ အတိုက်အခံ (ပြည်သူ့ခေတ်)
NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်…။
ဒီမိုကရေစီမှာတော့ အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းဆိုတာ ရှိရမှာပဲ။ ဒီမှာတော့ အခု အခြေအနေအရ ကျွန်မတို့ကို အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းလို့ ခေါ်ရင်လည်း မကန့်ကွက်ပါဘူး
ပြည်ခိုင်ဖြိုး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးဌေးဦး က ပြောပါတယ်…။
ဒီမိုကရေစီမှာ အတိုက်အခံရှိတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြန်ကြည့်ရတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီရှိတာပဲ။ စံနစ်တိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီရှိတာပဲ။ သို့သော်လည်းပဲ အတိုက်အခံရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းရှိတယ်။ အတိုက်အခံမရှိဘဲနဲ့ စုစည်းပြီး သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းရှိတယ်။ မတူပါဘူး။ နိုင်ငံတွေလိုက်ကြည့်လိုက်ရင် အတိုက်အခံမရှိဘူးဆိုတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကတော့ အတိုက်အခံဆိုတာ မရှိဘူး
ကျွန်တော့် အမြင်အရတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတဲ့ စကားနဲ့ ဦးဌေးဦးပြောတဲ့ စကားတောင် မတူညီကြဘဲ အတိုက်အခံဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ အတိုက်အခံ ရှိတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။
ကဲ ခင်ဗျားအမြင်ကရော ဘယ်လိုတဲ့လဲ ကျောင်းဒကာ…။
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အင်တာဗျူးထဲက စကားများ (VOICE)
ဒီလထဲမှာ နိုင်ငံတော် လူကြီးမင်းတွေ ကို နိုင်ငံခြားသတင်းစာတွေက အင်တာဗျူးခဲ့ကြပါတယ်။
ပထမဆုံး သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ကို
ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ သတင်းစာ Suddeutsche Zeitung ရဲ့
၀ါရင့်သတင်းစာဆရာ Stefan Klein က အင်တာဗျူးပါတယ်တဲ့ ဦးလေးရေ…။
အဲဒါကို VOICE ဂျာနယ်ထဲမှာ ဘာသာပြန်ဖေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်…။
အဲဒီအထဲက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ အဖြေလေးတွေ က တော်တော် ထူးခြားတယ်လို့ ထင်တာကြောင့် ပြန်ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။ ဒီ အင်တာဗျူးထဲမှာ သမ္မတကြီးရဲ့ မေးခွန်းကို မေးခွန်းနဲ့ ပြန်ပစ်ပြခဲ့တာလေးတွေကလည်း လှခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဗျာ…။ ဟုတ်မဟုတ် ဖတ်ကြည့်ပါဗျာ…။
မေး။ ။ သမ္မတကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေပြည်တော်ကိုလာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပြီး မကြုံစဖူး ထူးခြားတဲ့ အဆင့်တစ်ခုကို ရောက်အောင် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့တယ်။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို လုပ်တာပါလဲ။
ဦးသိန်းစိန်။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒီတော့ သူ့ကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ရဲ့ အပြင်မှာ ချန်ထားခဲ့လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အတိတ်ကာလမှာ တုန်းက သူဟာ တပ်မတော်အစိုးရအပေါ် ဆန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်တာဝန်ကို ကျွန်တော်ရယူလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံပြီး ဒိုင်ယာလော့ခ် လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ…။ မတူကွဲပြားခြားနားမှုတွေထဲမှာ ညီညွတ်မှုဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဘုံ တူညီမှုရှိတဲ့ အနေအထားကိုရောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ မတူတာတွေဘေးဖယ်ပြီး တူညီတဲ့ အမြင်သဘောထားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
မေး။ ။ ဥရောပဒေသက ပြည်သူတွေက လာမယ့် ၂၀၁၅ သမ္မတရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မလား ဆိုတဲ့ အချက်ကို မေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်လို့ မရရှိအောင် တားမြစ်မလားပေါ့ခင်ဗျာ…။
ဦးသိန်းစိန်။ ။ ဒီမေးခွန်းက အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ မပတ်သက်ပါဘူး။ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ ပိုပြီး ပတ်သက်တာပါ။ တကယ်လို့ အများသဘောတူညီမှု ရှိတယ်ဆိုလျှင် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီကိစ္စဟာ ပါလီမန်လွှတ်တော်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားကို မေးခွန်းတစ်ခု မေးချင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတကြီးအဖြစ် ခင်ဗျားမြင်တွေ့လိုပါသလား…။
မေး။ ။ သြော်ဒါက မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် မူတည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အခု ဥရောပမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အထူးအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးအနေနဲ့ ချီးမြှောက်ဂုဏ်ပြုကြတာတွေကို ကျွန်တော် တွေ့မြင်ရပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ တစ်ဦးကဲ့သို့ သဘောထားပြီး ဂုဏ်ပြုကြတာပါ။ သူက ၀က်မင်စတာ မှာ အထက်လွှတ်တော်နဲ့ အောက်လွှတ်တော်က ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေ ရှေ့မှာ မိန့်ခွန်းပြောတယ်။ သူ့ကို အခုလိုမျိုး ဆက်ဆံမှုတွေ လုပ်ကြတာကို သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ။
ဦးသိန်းစိန်။ ။ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အထူးအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလိုမျိုး ဆက်ဆံကြတာကို မြင်ရတာ ကျွန်တော် တကယ့်ကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ သမ္မတ ဖြစ်မလား၊ မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာ ကောင်းလား မကောင်းဘူးလား ဆိုတာကို ခင်ဗျားအနေနဲ့ ဖြေကြားပေးသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ခင်ဗျား ဖြေကြည့်သင့်တယ်။ (ရယ်လျက်)
ဒီအထဲ ထူးခြားတာလေး တစ်ခုက အများသဘောတူညီမှု ရှိတယ်ဆိုလျှင် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ် ဆိုတာလေးပါ။
အဲဒါကပဲ အရေးအကြီးဆုံး ပွိုင့်တစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေး….။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြန်မပြင်ရလောက်အောင် ပြည့်စုံတဲ့ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ မရှိ (ရန်ကုန်တိုင်းမ်)
ဒီလထဲ အခြေခံဥပဒေအကြောင်း ပြောခဲ့ပြန်ပါတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူကြီးမင်း နောက်တစ်ယောက်ကတော့
အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ ယူမီယူရီရှင်ဘွန်း သတင်းစာရဲ့ အာရှဗျူရိုအကြီးအကဲ မစ္စတာဂျူနီချီဖူကာဆာဝါ နှင့် အဖွဲ့ နဲ့
ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်မယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်သူက အတည်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူက ပြန်ပြင်လို့ရှိရင် ရပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြန်မပြင်ရလောက်အောင် ပြည့်စုံတဲ့ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ မရှိပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက အချိန်ကာလတစ်ခုမှာ ရေးခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေက လာမယ့် အနာဂတ် ကာလတစ်ခုမှာ မှန်ကန်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။
ကဲ ပြည်သူက အတည်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူက ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် ရပါတယ်တဲ့ ကျောင်းဒကာရေ့ …။
ပြည်သူသည်သာ အဓိက ပါတဲ့..။
ဒီနေရာကနေ ပြည်သူထဲက ပြည်သူတွေရဲ့ အသံအဖြစ် ၀ိုင်းအော်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ…။
အောင်သိန်းလင်း ၏ အောင်သိန်းလင်း (Envoy)
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဟောင်းကြီး ဦးအောင်သိန်းလင်း ရဲ့ အတွေးအမြင်လေးတွေပါ ကျောင်းဒကာ…။
အဆင်းမှာ ဘီးတတ်ပေးတယ်လို့ ထင်ရင်တော့ တတ်နိုင်ဘူးဗျာ…။
ရှေ့က သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် က အများသဘောတူညီမှု ရှိတယ်ဆိုလျှင် အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ် တို့ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့် က ပြည်သူက အတည်ပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူက ပြန်ပြင်လို့ရှိရင် ရပါတယ် တို့ ပြောနေကြတဲ့ အချိန်မျိုးကြီးမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံ ဦးအောင်သိန်းလင်း ကြီး က တရုတ်သတင်းစာ Southern Weekend နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောခဲ့တဲ့ ဒိုင်ယာလော့ခ်လေးတွေက လန်ထွက်နေအောင် လန်းလွန်းလို့ အောင်သိန်းလင်း ၏ အောင်သိန်းလင်း ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ အပင်ပန်းခံ ရိုက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
ဒီအင်တာဗျူးမှာ ဖြေထားခဲ့တဲ့ ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့ Thinking တွေက ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကြီးတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြုလိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ရက်ပါဘူး။
Thinking အရေးကြီးပါတယ် ဦးလေးတို့ရေ…။ Thinking လွဲလို့ကတော့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ မျက်နှာသာပေးမှုကို မရနိုင်ဘူးဆိုတာလေး… နွားတွေရှေ့က ထွန်ကျူးလိုက်ပါရစေဗျာ…။
ကဲ..ဦးအောင်သိန်းလင်းရဲ့ Thinking လေးတွေ နည်းနည်း လေ့လာကြည့်ကြရအောင်လား ကျောင်းဒကာရေ…။
မေး။ ။ မကြာသေးခင်ကပဲ အဲဒီဆန်ရှင်တွေ ကို အီးယူနဲ့ အမေရိကန်တို့က မိတ်ဆွေသဘောထား ပြသ တဲ့ အနေနဲ့ လျှော့ချခဲ့ပြီးပြီ မဟုတ်လား…။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ သူတို့ကို မယုံကြည်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အာဏာကို ရုတ်တရက် လုယူလိုနေတဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရှိနေဆဲပဲ။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုပ်သေးအစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ထူထောင်ရေးဖြစ်နေတယ်…။
မေး။ ။ နိုင်ငံတကာ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဆက်ဆံရေးနဲ့ ဆန်ရှင်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တလောကပဲ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်းက သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ လာတွေ့သွားတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါတွေက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုက်အ၀န်း ဆက်ဆံရေးတိုးတက်လာနေတာပဲ မဟုတ်လား။
ဖြေ။ ။ ကျွန်တော် ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ယူဆထားတာ ရှိတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဆိုတာကို ဘယ်သူတွေထိန်းချုပ်ထားသလဲ။ ဘန်ကီမွန်းကိုရောပေ့ါ။ နောက်ပြီး ကုလရုံးချုပ်ဆိုတာကလည်း အမေရိကန် နယူးယောက်မှာ ရှိတယ်လေ။ ဒါဆို ခင်ဗျားတွေးမိလောက်ပါပြီ။
မေး။ ။ ကျွန်တော့် အမြင်ပေါ့နော်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကတော့ ဘန်ကီမွန်းကို သဘောကျနေပုံပဲ။
ဖြေ။ ။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ ဘန်ကီမွန်းရော၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုတာရော၊ အယုံအကြည်မရှိဘူး။ သူတို့က အတူတူပဲ။ သူတို့တွေးနေတာက တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ပဲ။
မေး။ ။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန်လည်း မကြာသေးခင်က မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်သွားတယ်။ ဒီအပေါ် ခင်ဗျားရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုက…။
ဖြေ။ ။ သူလာလည်သွားတာကိုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျဆုံးခန်းပဲ။ သူမက ကျွန်တော်တို့ကို ဒီမှာတွေ့ချင်တာမဟုတ်ဘူး။ သူမရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်က ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံအတွက် မဟုတ်ဘူးဗျ။ အဲဒီအမျိုးသမီးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆန်ရှင်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာ သိပြီးသားသူပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လို့ပဲ မြင်တယ်။
မေး။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က အပြတ်အသတ် အနိုင်ရသွားတယ်။ အခုဆို လွှတ်တော်ထဲမှာ (NLD) ကိုယ်စားလှယ် ၄၃ ဦးရောက်သွားပြီ။ လူကြီးမင်းက လက်ရှိ အာဏာရပါတီရဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင်လည်းဖြစ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်နေတော့ NLD နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စတွေအတွက် ဘယ်လို အစီအစဉ်တွေ ရေးဆွဲထားပြီးပါပြီလဲ…။
ဖြေ။ ။ (ရယ်လျက်) ဟုတ်လား။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလား။ ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ မူဝါဒအားလုံးက တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက် ချထားတာပဲ။ အာဏာရပါတီဆိုပြီး တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာတွေ လုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုး ကောင်းစားရေးလုပ်နေတဲ့ ဘယ်ပါတီနဲ့မဆို ပူးပေါင်းသွားမှာပဲ။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က ၄၃ နေရာရသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့ ၆ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ၇၆ ရာခိုင်နှုန်း ဆိုတော့ ကိုယ်စားလှယ်အများစုကြီးကို ကျွန်တော်တို့ ရထားတာပဲ မဟုတ်လား။
မေး။ ။ ရန်ကုန်မြို့မှာ NLD ရုံးခွဲတွေ အများကြီးဖွင့်လာတာ တွေ့ရတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တစ်ခဲနက် ထောက်ခံအားပေးနေကြတာလည်း တွေ့ရတယ်။ ဒီအပေါ် လူကြီးမင်းရဲ့ သဘောထားသိပါရစေ…။
ဖြေ။ ။ ဒါကတော့ သူတို့ အရူးအမူး ဖြစ်နေကြတာပေါ့ဗျာ…။ အိုကေ…။ သူမက ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ နောက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဗျာ…။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့ အမျိုးသားသူရဲကောင်းတစ်ဦးပဲ။
မေး။ ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီစံနစ်နဲ့ အသွင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာလို့ ပြောခဲ့တယ်နော်။ တစ်နေ့နေ့မှာပေါ့။ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အာဏာရပါတီက အတိုက်အခံပါတီဖြစ်သွားတာကြောင့် လူကြီးမင်းရဲ့ လက်ရှိ အနေအထား ဆုံးရှုံးသွားမယ်လို့ တွေးမိပါသလား။
ဖြေ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အများစု အနိုင်ရတဲ့ ပါတီက အစိုးရ အဖွဲ့ဖွဲ့မှာပဲလေ။ ဒါဟာလည်း လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ရတာပဲ။ အဲဒီ ဥပဒေကိုလည်း ပြည်သူတွေကပဲ အတည်ပြုခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်။ ခင်ဗျားပြောသလို အာဏာရပါတီနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့က ပြောင်းချင်ပြောင်းသွားမယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကတော့ ပြောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး…။
မေး။ ။ ဒါပေမယ့်…။ NLD ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် မဟုတ်လား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်တယ်။ သူတို့က လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို မကြိုက်ကြဘူး။
မေး။ ။ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်တစ်ဦးက တိုင်းပြည်ရဲ့ ရာထူးကြီးကြီးရယူဖို့ ဥပဒေက ခွင့်ပြုမထားဘူး။ ဒီအတိုင်းသာဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနာဂတ် နိုင်ငံရေးက ပြသနာတစ်ရပ် ဖြစ်လာနိုင်တယ် မဟုတ်လား…။
ဖြေ။ ။ မှန်တယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတနဲ့ ဒုတိယ သမ္မတတွေရဲ့ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ကို ဥပဒေမှာ အတိအလင်း ဖေါ်ပြပြီးသားပဲ…။
မေး။ ။ ဒါဖြင့် သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆိုတာ အောင်မြင်မယ်လို့ ယူဆပါသလား။
ဖြေ။ ။ NLD ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးရဲ့ ဇနီးပဲ။ သူတို့က ဘာကြောင့် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ချင်ရတာလဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ နိုင်ငံရဲ့ အသက်သွေးကြောလို အရေးကြီးတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့က နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။ အဲဒီဥပဒေကလည်းပဲ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဇနီးကို နိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခွင့်ပြုမထားဘူး…။
မေး။ ။ ဒါဆိုရင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကိစ္စဆိုတာ အောင်မြင်မှု မရှိနိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာလား…။
ဖြေ။ ။ နည်းလမ်းမရှိဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း သူတို့ရဲ့ လှည့်ကွက်ကို ကြိုက်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တစ်ချိန်က ဗြိတိသျှကိုလိုနီ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဗြိတိသျှလူမျိုးတွေကပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် အုပ်ချုပ်သွားတယ်။ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်နိုင်ငံကို နောက်တစ်ကြိမ် ကိုလိုနီ မဖြစ်စေချင်တော့ဘူး။ ဒါ အဓိက အကြောင်းရင်းပဲ။ ဒုတိယ အကြောင်းရင်းက ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံထဲကို နိုင်ငံခြားစစ်တပ် လာရောက်မှုကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်လို့ပဲ။ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာအတွက် ဒီအချက်တွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ် မဟုတ်လား။
မေး။ ။ လူကြီးမင်းက လက်ရှိ အာဏာရပါတီရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတော့ လွှတ်တော်ထဲက အတိုက်အခံပါတီတွေရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ။ သူတို့က မိတ်ဆွေတွေလား။ ပြိုင်ဘက်တွေ ဒါမှမဟုတ် အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ရမယ့် သူတွေလား။ တစ်ခုခုပေါ့။
ဖြေ။ ။ ယှဉ်ပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်တယ်။
မေး။ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်လို သင်ခန်းစာမျိုး ရခဲ့ပါသလဲ။ ဥပမာလေးနဲ့ ပြောပြနိုင်မလား…
ဖြေ။ ။ အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ တကယ့်ကို အများကြီးရခဲ့ပါတယ်…။
ဥပမာအားဖြင့်…၊ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ပါတီက ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတာကို ပိုပြီးနားလည်အောင် ပြည်သူတွေနဲ့ ပိုမိုထိတွေ့ရမယ်ဆိုတာရယ်…၊ ပြည်သူတွေရဲ့ တွေးခေါ်မှုစတိုင်လ်ကို ပြောင်းဖို့လိုတယ် ဆိုတာရယ်..။ ပြည်သူတွေနဲ့ ပုံမှန်ထိတွေ့ ဆက်ဆံပြီး ဗဟုသုတအသိအမြင်တွေ ပျံ့နှံ့အောင် လုပ်ရမယ် ဆိုတာရယ် သိလာရတယ်…။
မေး။ ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းက သမ္မတဦးသိန်းစိန်က မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားဖို့ ကြေညာခဲ့တယ်။ တရုတ်လူမျိုးတော်တော်များများက ဒီပြသနာကို တော်တော်လေး စိတ်ဝင်စားနေကြတာ တွေ့ရတယ်။
ဖြေ။ ။ ဒီကိစ္စက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားရေးမူဝါဒ မဟုတ်သလို လွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ ဖြစ်တယ်…။
မေး။ ။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဆိုတာ သမ္မတကြီးကို ပြောတာပါလား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်တယ်။ အဲဒါ သမ္မတရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆပဲ။ လွှတ်တော်က ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သမ္မတရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်တယ်။ သမ္မတက တရုတ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေး ခိုင်မြဲနေမှုကို ဖြတ်တောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်။
မေး။ ။ ဒါဆိုရင် မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းက ဆက်လုပ်ဖြစ်မယ်လို့ လူကြီးမင်း ထင်ပါသလား…။
ဖြေ။ ။ ဆက်လုပ်ရမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံအတွက် စဉ်းစားရမှာ။ ကျွန်တော်တို့ လျှပ်စစ်စွမ်းအားတွေလိုတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပြတ်တောက်မှုက အချိန်အကြာကြီး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒါလည်း နိုင်ငံရေးကိစ္စတစ်ရပ်ပဲ…။ တရုတ်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို တချို့အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေက ဖြတ်ပစ်ချင်နေကြတယ်လို့ ခင်ဗျားမတွေးမိဘူးလား…။
မေး။ ။ ဒါပေမယ့် မြစ်ဆုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး NGO အဖွဲ့တွေ မီဒီယာတွေနဲ့ မြန်မာလူမျိုးအတော်များများက တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ ပြည်တွင်းက သယံဇာတတွေကို အရမ်းထုတ်ယူနေကြတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းအောင်လုပ်နေကြတယ်ဆိုပြီး စောဒကတွေတက်နေကြတာ တွေ့ရတယ်။ လူကြီးမင်းရော တရုတ်ကို မုန်းနေသလား။
ဖြေ။ ။ ဘာလို့ မုန်းရမှာလဲ။ တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့က မိတ်ရင်းဆွေရင်းတွေပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခတွေ ကြုံနေတုန်းက တရုတ်တွေကပဲ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီခဲ့တာ အထင်အရှား တွေ့နိုင်တယ်…။
ကျွန်တော် တစ်ခါက ပို့စ်တစ်ပုဒ်ထဲမှာ ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အင်တာဗျူးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ အဗျူးခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အရည်အချင်းကို ကောင်းကောင်းကြီး အကဲဖြတ်လို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတာလေးလေ..။
ဒီအင်တာဗျူးက အဖြေစကားလေးတွေက ဦးအောင်သိန်းလင်းမှာ နိုင်ငံရေးဝမ်းစာဘယ်လောက်ရှိနေသလဲဆိုတာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ထင်ထင်ရှားရှားကြီး ဖေါ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ..။
ဒီအင်တာဗျူးကိုဖတ်မိတဲ့ ကျွန်တော့် အမြင်လေး ပြောဖို့လိုလာခဲ့ပြီပေါ့ ကျောင်းဒကာရယ်…။
ဟုတ်ပါတယ်။ အစကတည်းက သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန် ရဲ့ နိုင်ငံရေးအရွေ့မှာ ပါမလာခဲ့ဘဲ ရောက်တဲ့နေရာမှာ ရပ်တန့်ပြီး ကျန်နေခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါ ခင်ဗျာ.
လွမ်းလို့ကျန်ရစ်ခဲ့မှာကို အားနာပါတယ် ဦးအောင်သိန်းလင်းရေ…။
ဒီတစ်ခါတော့ မတင်တာကြာနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ခွင့်ပြုပါ ကျောင်းဒကာ…။
၂၀၁၂ သင်္ကြန်လက်ကျန် ဓါတ်ပုံလေးတွေပါ…။
ပုံ ၂။ သင်္ကြန်ရေကစားနေတဲ့ ကိုရင်လေးတွေရဲ့ အပြုံး…။
ပုံ ၃။ ပုဂံနေ၀င်ချိန် ဗရမ်းဗတာ ရိုက်ချက်တစ်ခု…။
ပုံ ၄။ ပုဂံနေ၀င်ချိန် …။
ပုံ ၅။ တောင်စွယ်နေကွယ်ချိန်…။
ပုံ ၆။ အုတ်ပုံအုတ်တံတိုင်းဘေးက နေ၀င်ချိန်ကို စောင့်နေရင်း ရိုက်ခဲ့တာပါ။
ပုံ ၇။ ပုဂံ ပန်းချီ…။
ပုံ ၈။ ပုဂံ ပန်းချီ ၂…။
မိန်းမတွေက အထက်ကို တစ်ဆင့် မတက်သင့်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာ
မြန်မာနိုင်ငံက မိန်းမတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြသနာတစ်ခုကို
ယောနသံ စင်ရော် ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရေးထားတဲ့ အတွေးပါ။
မိန်းမ ဆိုရင် ထမင်းချက်၊ ကလေးထိန်း၊ အိမ်မှုကိစ္စလုပ် ဆိုတာတွေက
ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ထုံးစံတစ်ခုလို ဖြစ်နေခဲ့တာပါ…။
အဲဒီကနေ ဖေါက်ထွက်ပြီဆိုရင် အသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့
ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ လိုချင်တာ မိဖုရား ညားတော့ ဘုရင်မ
ဆိုတဲ့ သီချင်းကလည်း အဲဒီ ပြသနာ မျိုးပါပဲ…။
ဒေါ်ဘယ်သူ နဲ့ ခင်ပွန်းတဲ့ အံ့သြစရာ…
ဆိုတဲ့ ဖိတ်စာပြသနာကလည်း အရီးလတ်ပြောတဲ့
သမရိုးကျ အဆင့်က အထက်ကို တစ်ဆင့်တက်လိုက်ရင်
ကြုံရမယ့် မိန်းမတွေရဲ့ ဒုက္ခတစ်ခုလို့ ထင်ပါတယ် အဘဖေါရေ…။
အထူးသဖြင့် ဘုရင်မလုပ်ချင်တဲ့ မိန်းမတွေဟာ
ယောနသံစင်ရော်လို ဒုက္ခတွေကို ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ပြီးမှ
ဘုရင်မ လုပ်လို့ရမယ်လို့ ဆိုလိုသွားတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်…။
အစ်ရီး မခင်လတ် ကိုကြည့်ရတာတော့
ခန်းကိုကု ကားမော်ဒယ်လိုမိန်းမ မျိုးပဲ လိုချင်တယ်…
တူ့ဟာတူ ဘုရင်မ လုပ်လုပ် မိဖုရားလုပ်လုပ်…
ဘုရင်မ ဖြစ်တော့ (သူဦးဆောင်တော့)ကိုယ် သက်သာတာပေါ့…
မိဖုရားဖြစ်တော့ အဟိ…. မောင်းမ မိဿံ ထားလို့ရတာပေါ့..
ချိုပေါ့ကျ ကအရသာခံပြီးသောက်နေတော့ comment က နဲနဲတောင်နောက်ကျနေပြီ။
ကိုဘလက်ရေ….ကျတော့် အတွက်တော့ အပတ်စဉ်ထွက်သမျှ ဂျာနယ်တွေကို ၀ယ်မဖတ်နိုင်တော့ (ပိုက်ဆံမရှိလို့) ဒီ “ချိုပေါ့ကျ” ကို တနေရာထဲ၊ တထိုင်ထဲ၊ စုစုစည်းစည်း ဖတ်လိုက်ရတော့ အကြောင်းအရာတော်တော်များများကို တီးမိ၊ ခေါက်မိ ရှိလှသဗျာ။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်ဆီက စိုင်းခမ်းလိတ် ရဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ် interview ကလည်း ဆယ်ကျော်သက်ဘ၀က ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ ရှူးသွပ်ခဲ့ရတဲ့ သီချင်းဖွဲ့နွဲ့ပုံတွေကို လွမ်းမိတယ်ဗျို့။ ဒါနဲ့ ကိုဘလက်…..စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ “မောင့်လပြည့်ဝန်း” တို့ “စတုတ္ထနိဗ္ဗာန်ကအပြန်“ တို့ကလည်း ဇာတ်လမ်းတွေရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ အဲဒီ အကြောင်းတွေကိုလည်း ရှိရင် ရေးပါအုံးဆရာရေ…………
“ကိုရဲလွင်” ကြီးကိုတော့ သူရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ သီးချင်းတွေနဲ့ အတူ သူ့ရဲ့ “လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းပန်းရဲ့လမ်း” လူမှုကွန်ယက် လုပ်ငန်းကြီးလည်း ဒီထက်ဆထက်တိုး၍ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်ဗျား။
ကြုံရင် အေးမြတ်သူကို ပြောပေးပါ။ အေးအေး၊ ဆေးဆေး သေချာပြန်စဉ်းစားစေချင်တဲ့ အကြောင်း၊ စိတ်လိုက်မာန်ပါ မဆုံးဖြတ်စေချင်တဲ့အကြောင်း၊ နှမြောလွန်းလို့ပါ။
အောင်သိန်းလင်းက ပြောနေပြန်ပြီ၊ ဧရာဝတီ ကိစ္စ ကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ တထပ်တည်းပါပဲတဲ့၊ အားလုံးဟာ ဘာသာပြန်လွဲချော်မှုပါတဲ့ …..ဆရာရေ ….ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ ဗျို့။
ကိုရီးယားကားများလိုပဲ အခန်းဆက်နဲ့ ဖတ်မိနေပါတယ်။
ချိုပေါ့ကျကို ဖြည်းဖြည်းလေးသောက်နေရတဲ့အပြင် ကွန်မန့်တွေကပါ အားဖြည့်ထားတော့ မွန်မွန့်အတွက်ကတော့ အားလုံးကို လိုက်ဖတ်နေရတာပဲ ဗဟုသုတအများကြီးရနေပါတယ်။
မြင်မိသလိုလေး ဥာဏ်မှီသလောက်လေး …ပေါ့ပေါ့ပါးပါး
တနေ့ သေကြရမည် မသေခင် အမြင့်ဆုံး ပျံကြ …
ခြေထောက်နှင့်ပါ ပိတ်ကန်ဖူးပါသည်… အော်..စိတ်ထွက်ပေါက် ဟဲ့ ဆိုပြီး …တခါသား ထိချက်လွဲလို့ ဖနောင့်အသားကျေဖူးပြီး ၁လလောက် ထော့ကျိုးထော့ကျိုး ဖြစ်တော့မှ..
ထို အကျိုးမရှိလှသော စိတ်ထွက်ပေါက်ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါသည်…
လိုချင်တာမိဖုရား ညားတော့ ဘုရင်မ
တနေ့ သေကြရမည် .. မသေခင် ကြိုက်တာ ရှာယူကြ….
(ကျနော်ကတော့ ဘာလာလာ ပါ… ဘာလာလာပါ အချစ်ရေ ..ဘာလာလာပါ …
တနေ့ သေကြရမည် .. မသေခင် (ငယ်တုန်း) ခုန်ချကြည့်ကြ…
Entrepreneurship ဒါမှမဟုတ် Innovation ကို အားပေးတဲ့
တနေ့ သေကြရမည် .. မသေခင် ကိုယ်ရည်စစ်ကြ…
အချိန်ပြည့်မီးရ၍ ၀မ်းသာ (ကြေးမုံ)
ချွေတာရေး စနစ်တကျ သုံးစွဲရေး ဘက် နည်းနည်း တူးကြည့်ချင်တာပါပဲ…
အိမ်တွေမှာ ချွေတာတယ် ချွေတာတယ် ဆိုပြီး မီးချောင်းထက် ၀ပ်ပိုစားတဲ့
မီးလုံးဝါ၀ါလေးတွေ သုံးနေကြတုန်း.. ။ သေချာပြန်တွက်ကြည့်ရင် ..
တလတလ တတိတတိ နဲ့ သွားတဲ့ …မီတာခ .. ပိုအပျက်လွယ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ
ဖြစ်တဲ့အချက်… သတိထားမိရင် အီကိုနိုမီ ပိုတောင် မဖြစ်သေးရဲ့ …
(ဒါတောင် သည်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းနေရသေး …အော်..ဆေးမြီးတိုသမားများ …)
တိုင်းပြည်အတွက်လည်း လျှပ်စစ်စွမ်းအား ပို ကုန်ကျတယ် မဟုတ်ပါလား..
ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ နိုင်ငံတော် အလံ အလေးပြုသင့် မပြုသင့် (newday)
ဆိုရှယ်လစ် အမွေဆိုး လို့ မပြောရက်လို့..
၁၈နှစ်သမီး ရည်းစားထားသလို ..မောင်ချစ်လား ဟင် လို့
ခနခန မေးတဲ့အထာ လို့ပဲ ပြောပါတော့မယ်..
ချစ်တယ်ဗျို့ ..ချစ်တယ်… ချစ်လွန်းလို့ …အားမလိုအားမရဖြစ်ရ
မချင့်မရဲဖြစ်ရ .. ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ခံစားရ …
အဲ …ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ..ခနခန ကြုံတိုင်းချစ်လား လာလာမေးနေတဲ့
ဆံပင်ဖြူသူတွေ အတွက် သတင်းတစ်ပုဒ် (ကြေးမုံ)(newday)
ဆံပင်ဖြူမယ့်အလုပ်တွေ ခုတလော လုပ်ရတာများနေလို့ …
စာလည်း အေးဆေးမရေးနိုင်.. မန့်တာလည်း နှေးကွေးနေပါကြောင်း…
တေးရေးတေးဆို ၀င်းမော် ကွယ်လွန်ခြင်း ( မန္တလေး အာရုဏ်ဦး )
ကိုဝင်းမော် ဆုံးရှာပြီပေါ့ …စိတ်မကောင်းဘူးဗျို့
တိုက်ရိုက် အားဖြင့် ..တပည့်ခံ မသင်ယူဖူးပေမယ့် …
သူနဲ့ နောက်ထပ် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကွယ်လွန်သူ တယောက်ဖြစ်တဲ့
ကိုဝေဖုန်း တို့ ရေးခဲ့တဲ့ နုတ်စ်တွေ တီးဖူး ကျင့်ဖူး လို့ …
ဆြာ တယောက်လို သဘောထားပါကြောင်း..
အမျှ အမျှ အမျှ ပါ ကိုဝင်းမော်ရေ..
ဆြာသမားနှယ့် တယ်လည်း ထွင်သကိုး ..
အုန်းကျုံန်း သက်သက် အခွေလေး လုပ်လိုက်ရင် ပိုကောင်းသွားမလား
တွေးနေမိပါတယ်… ဘယ့်နှယ့် ခုချိန်ထိ ..ကော်ပီဆိုဦးမလို့လား ….
(ကိုးပလေး သီချင်းတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ဟို အငိုပါရမီရှင်ဂျီး ကို
ကတောက် …. ဘယ့်နှယ့် ရိုက်လို့ဝ သွားဘီ ပြောဇမ်းပါအေ…
အဲ … ရိုက်လို့ ..လက်မခံတော့တဲ့ .. ဖီလင်မလာတော့တဲ့..
ရင်မခုန်တော့တဲ့ .. မားကတ် ဆဂ္ဂမန့် ရှိလာလို့ …
စွက်ဒဂျီ ချိန်းရင်ချိန်းဒယ်ပေါ့ ….(ညင်းညင်း ..)
fled သုံးတာထက်စာရင် retreat သုံးသွားတယ်ပေါ့ဗျာ..
အူအတက်ရဲ့ အမြစ်က …ချက်ကနေ ညာဘက် ပေါင်ရင်းက ဘေးကို
ငေါထွက်တဲ့ တင်ပဆုံရိုးအစွန်း ကို မျဉ်းဆွဲ ..၃ပုံ ပုံ အတွင်း၂/၃ပုံ အပြင်၁/၃ပုံ
အဲ့ဆုံတဲ့နေရာမှာ ရှိသတဲ့ …
ခွဲရင် မာစီဒီး တံဆိပ်လို ..၃မြှောင့် ပုံ ခွဲရသတဲ့ ..
နောက်နှစ်နွေပြန်လာရင် အမာရွတ်ကျန်မကျန် ကျိဂျင်ဇမ်းဘာဘိ..အဟိ..
ဒါမျိုးကြီးတွေ တကယ် ရှိခဲ့တယ်လား …ဆိုတာရယ်..
တကယ် ရှိခဲ့ဖူးတာ တကယ် ပြောခွင့် ရေးခွင့် ရပြီလား ဆိုတာရယ်ကို
ဘွားတော် က တော် အာရုံပဲ ….
ဆန့်ကျင်ဘက် သဘောတရားကိုပဲ နားမလည်သလား…
မေးခွန်းကိုပဲ အဓိပ္ပါယ်မပေါက်သလား တော့ မသိ..
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်တာတော့ လူတိုင်း ရေချိုးရင်
မေးချင်ရဲ့ …သူရော ..သူငယ်ငယ်က တန်းတန်းစွဲ သဘောကျခဲ့ဖူးမယ့် ..
စူပါစတား တယောက်ယောက်ကို (အရွယ်ကောင်းမှာ)၀တ်လစ်စလစ် မမြင်ဖူးချင်ဖူးဘူးလား
ပြန်မေးရင် ဘာဖြေမယ် မသိ..
လေးလေးစားစား သာဓုခေါ်ပါရစေ ဦးလေးရေ …
ဗရာကြော် ဖာ့စ် ၀ိခ်လိ
နောင်တ။ ။ပြုသင့်သည်ကို မပြုမိ၊ မပြုသင့်သည်ကို ပြုမိသဖြင့် အချိန်လွန်မှ ပူပန်ခြင်း။
ဆြာသမားဒွေ ကို နောင်မှတတဲ့ နောင်တ မရစေချင်ဘူး…။သံယောင်လေး လိုက်ပါရစေ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် (STREET VIEW)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဦးဌေးဦးတို့ပြောတဲ့ အတိုက်အခံ (ပြည်သူ့ခေတ်)
အန်တီ Maya Lin ရဲ့ စကားကိုပဲ ပြန်ကုတ် တော့မယ်ဗျို့…
သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အင်တာဗျူးထဲက စကားများ (VOICE)
ဗရာကြော် ဒို့ဘကြီး …
ဒို့ဘကြီးကတော့ ပြောင်ပြောင်ပဲ ဗျို့ … ချစ်ဖို့ကောင်းပါပေ့…
အင်း …အချစ်ဆိုလို့ ..
ဟိုဆြာပြောတာတော့ …အချစ်နဲ့အမုန်းဟာ ၁ဒီဂရီပဲ ကွာတယ်ဆိုလား ..
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြန်မပြင်ရလောက်အောင် ပြည့်စုံတဲ့ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ မရှိ (ရန်ကုန်တိုင်းမ်)
ဟုတ်ကဲ့ …ယနေ့ခေတ်မှာ ဘာမဆို စပီဒီ ဖြစ်နေပါပြီ …
သွက်သွက်ကလေးတော့ သွားကြပါ အူးလေးတို့ရယ်…
ခုတော့ မဟုတ်ဘူး တဲ့ …ပြောပြန်ဘီ….
အလွတ်သဘောပြောတယ်လည်း ပါရဲ့ … ဘာပြောမိလည်း မမှတ်မိဘူးလည်း
ကြားရရဲ့ ဘာသာပြန်အလွဲလို့လည်း ဆိုသတဲ့ ….
အင်းလေ.. အနှီသဒင်းဇာ ဂျီးက ..ပလော်ဖက်ချင်ဒယ်
ထွမ်စလိတ်တာ မငှားနိုင်ရှာတော့ …၆တန်းကလေး ခေါ်ပြန်ခိုင်းလိုက်လို့
p.S ဒါ့ကြောင့်လည်း မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ မကြုံစဖူး ထူးကဲတဲ့
ပုံ ၁။ ၇။ ၈ တို့ကိုနှစ်သက်မိပါကြောင်း…
အလယ်က ဖလဲယားတွေက ကျနော် ထိတွေ့ဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့
အိမ်စာ ဖြစ်နေလို့ မဝေဖန်တတ်သေးပါကြောင်း…
အဆိုပါအိမ်စာ ကို မလုပ်ဘဲ ..ဟိုအိမ်စာ ဂလေးမား တွေ လုပ်ဖြစ်နေပါကြောင်း..
၁။ ၁နှစ်၁ခါလုပ်တဲ့ မီးပန်းပွဲတော်ရယ်
၂။ မယ်ရီယော့ ဟိုတယ်က မင်ဂါဆောင် ဖက်ရှင်ရှိုးပွဲရယ် လွတ်သွားတဲ့အတွက်…
ခုတခေါက် ..ခရီးထွက်မှာ က…နည်းနည်း အရင်းကြီးသွားပါကြောင်း..
အော်… နူးညံ့တဲ့အမိန့်တော် ဆိုတော့လည်း …
-ယောနသံဇင်ယော်ကို တက္ကသိုယ်ပထမနှစ်မတက်ခင် ဖတ်ဖူးတာဖြစ်ပီး လူပိန်းအတွေးနဲ့ဘဲ သဘောကျစိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။ အခုလို မတူတဲ့အမြင်နဲ့ ဝေဖန်တာတွေမြင်ရတော့ ပိုလို့တောင် သဘောကျပါတယ်။
-မြန်မာပြည်က တေးရေးဆရာတွေ လက်ရှိခေတ်မှာရော အခြေနေကောင်းဘီလား သိချင်ပါသေးတယ်။
-မိဖုရားနဲ့ ဘုရင်မ ကိတ်စကတော့ ၂ဦး၂ဖက် သဘောတူကျေနပ်ကြရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
-သိန်းငှက်ပျိုတို့ရဲ့ ဘ၀အစက ရဲရင့်မှုတွေအပြည့်ပါဘဲ။
-ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ နိုင်ငံတော်အလံကို အလေးပြုချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတော် သီချင်းတပုဒ်လုံးဆုံးအောင် မတ်တပ်ရပ်နေရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မိနစ်ဝက်လောက်ငြိမ်သက်ပါဆိုရင် ပိုကောင်းမလားလို့။
-တေးရေးတေးဆိုဝင်းမော်နဲ့ပတ်သတ်လို့ အူးဘလက်ရဲ့ ချိုပေါ့ကျမှာ ပထမဆုံးဖတ်ဖူးတာပါဘဲ။
– ဖိုးကာရဲ့တေးစီးရီးတွေကို အနဲငယ်ပျင်းစရာကောင်းတယ်ထင်လို့ သိပ်နားမထောင်ဖြစ်ပါ။
-IDIOTS နဲ့ တွတ်ပီ ကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ သူဆုတောင်းတာလေးလဲ ပြည့်ပါစေ။
– မင်းသမီးတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူး လို့ဘဲပြောပါရစေ။ လူမသိ သူမသိ ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအတွက် အမှန်တကယ်စိတ်မကောင်းပါ။
– ဦးရဲလွင်ရဲ့ သတင်းတွေကို ဂျာနယ်တွေဓါတ်ပုံနဲ့ တကွဖေါ်ပြထားတာတွေ တွေ့လို့ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူစိတ်ဖြစ်မိပါတယ်။
– စာရေးဆရာမင်းကိုနိုင်ရေးတဲ့ စာအုပ်တော့ ၀ယ်ဖတ်ပါအုံးမယ်။
– အမေစု၊ သမဒဂျီး နဲ့ တကွ နိုင်ငံအပေါ်စေတနာရှိသော ခေါင်းဆောင်ကြီးများ အားလုံးကို လေးစားပါတယ်။ ဟို ကြံ့ဖွတ်က ဘဲဂျီးကိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အထုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင်မှာ ဗီလိန်ဇာတ်ကောင်တနေရာပေးသင့်ပါတယ်။
– ပုဂံ ကိုတော့ ဒါ့ပုံတွေကြည့်ပီး လွမ်းရုံဘဲတတ်နိုင်တော့တယ်။
ဦးဘလက်ရဲ့ဂျူလိုင်ချိုပေါ့ကျကိုတော့ အိမ်ကလိုင်းကအဆင်မပြေလို့ နောက်ကျမှ သေသေချာချာဖတ် ရပါတယ်.. ဦးဘလက်ကို ရွာသူတယောက်တင်တဲ့ ဓာတ်ပုံထဲမှာတွေ့မိ တော့အသက် သိပ်မကြီးသေးသလိုပဲ.. ဘ၀စရုံရှိသေးတဲ့ အရွယ်ထင်ပါတယ်.. ကျမဦးလေးတယောက်နဲ့ လည်းတော်တော်တူနေတယ်.. ဒါပေမယ့်ဦးလေးက အရပ်ပိုမြင့်ပြီးအသားလည်းပိုညိုလိမ့်မယ်.. မျက်နှာဖီးချား အရမ်းတူတယ်…မဆိုင်တာဝင်ပွား တာနော်..
ဦးအောင်သိန်းလင်းတို့ ဦးကျော်ဆန်းတို့ကိုတော့ကျမကချီးထုတ်တွေလို့ပဲသတ်မှတ် ထားတယ်..တခါမှကိုကြည့်မရခဲ့တာပါ..အကြီးအကဲလုပ်နေသူတစ်ဦးရဲ့စကားက ပရမ်းပတာ နိုင်လွန်းပါတယ်. အခုချိန်သူပြောထားတာသူပြန်ဖတ်လည်းရှက်ရကောင်းမှန်း သိမယ်မထင်ဘူး …သနားစရာနော်..
ကိုမင်းကိုနိုင်တို့နဲ့တခြားသူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ကြိုးစားနေသူတွေကို အယူအဆချင်းမတူညီလို့ သူတို့ကိုဆန့်ကျင်လို့ဆိုပြီး တားဆီးပိတ်ပင်ထားခဲ့တာတွေကိုတော့ ရှုံ့ချမိတယ်..သူတို့ လုပ်ရပ်တွေက နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်စေတနာနဲ့ လူတိုင်းလက်မခံနိုင်စရာမရှိအောင်ပြီးပြည့်စုံ နေလားလို့မေးလိုက်ချင်တယ်….
အဆီယစ်နေသူများ ဘာသာပြန်ကဗျာလေးကိုဖတ်ပြီး ကျမတို့ရဲ့တူညီဝတ်စုံဝတ် ဘဘကြီးတွေ ရဲ့အဆီယစ်နေတဲ့မျက်နှာကြီးတွေကိုပြေးမြင်ယောင်မိတယ်..တော်တော်လည်းသဘောကျမိတယ်.
သီချင်းဆိုရင် မဒီရဲ့အဖော်မဲ့စကားတို့..ဇမ်းနူးရဲ့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခြင်းတို့လို သီချင်းမျိုးတွေကို ကြိုက်ပေမယ့် ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သံစဉ်စာသားမာယာမပါတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေကိုလည်း သဘောကျနှစ်သက်ပါတယ်..သူ့သီချင်းလေးတွေက သူ့ခံစားချက်တွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သမရိုးကျအကြောင်းအရာလေးတွေကို သိပ်မဆန်းပြားတဲ့သံစဉ်တွေနဲ့ ဖွဲ့နွဲ့ထားပေမယ့် ရိုးအီမသွားအောင်ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တာက သူ့ရဲ့အရည်အချင်းပါပဲ..
အော်..ဦးဘလက်ရဲ့ချမ်းမီလေးအမြန်ဆုံးအလုပ်တွေပြန်လုပ်နိုင်ပါစေနော်… ကျမကတော့မိန်းကလေးဖြစ်လို့လားမသိဘူး…အေးမြတ်သူတို့မိုးဟေကိုတို့လို စက်ဆီအသားပေးတွေထက် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်တို့ သက်မွန်မြင့်တို့ ချစ်သုဝေတို့ကိုပိုကြိုက်တယ်… ယောင်္ကျားနဲ့မိန်းမ အတွေးအမြင်ချင်းဘယ်တူပါ့မလဲနော်.. ခင်မြတ်မွန်ရဲ့သားကိုတော့ ပြောချင်ပါတယ်..သူ့အမေကိုတကယ်သနားရင်.. ဒီအရွယ်ကြီး ရောက်နေပါပြီး..လင်ကောင်း တော့မရစေချင်ပါတော့နဲ့..သားကောင်းအဖြစ်နဲ့ပဲအမေ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့..
ကျမတို့ရဲ့ဘဘကြီးစိန်ကလည်း လူကြည့်တော့သိပ်မပြေးသလိုထင်ရပေမယ့် သူလည်း သူ့အတိုင်းအတာလေးနဲ့သူတော့ ရှောင်တတ်တိမ်းတတ်ပါတယ်နော့်..ခေသူမဟုတ်..
ဂျာနယ်တွေကိုဝယ်မဖတ်မိတဲ့အတွက် အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေကို မသိရပေမယ့် ဦးဘလက်ကျေးဇူးကြောင့်သိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ..
နေဆီပြန်မယ့်ငှက် သီချင်းလေးနဲ့ ယောနသံစင်ယော်ကို စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး ဦးဘသန်းရဲ့ စာအုပ်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာ.. ဒီစာအုပ်ထဲက တွေးသိတဲ့ ရှုထောင့်တွေ အဖြစ်ချင်းတူလွန်းတယ်ဗျာ.. ကျွန်တော်လည်း ဒီနေ့ထိ အဲဒီသီချင်းလေးကို မကြာမကြာတီးဆိုဖြစ်နေတုန်းပါပဲ။
အဲဒီသီချင်းကို ကျွန်တော်တော်တော် ခပ်ငယ်ငယ်လေးထဲက စွဲစွဲလမ်းဖြစ်ခဲ့တာ အခုတစ်ခါတစ်ခါ အော်ဆိုတဲ့အခါ ချာတိတ်တွေက မသိကြတော့ဘူးဗျ။ ဒီနေရာလေးကို ရောက်ဖြစ်တော့ ကိုဘလက်လို လူတွေကို တွေ့ရတော့ တော်တော်ကျေနပ်မိတယ်။ ကိုဘလက်ရဲ့ အေဗာတာဘေးက စာကြောင်းလေးကို ဖတ်လိုက်ရကတည်းက စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေခဲ့တာ.. ဒီနေ့မှပဲ ချိုပေါ့ကျရဲ့ အရသာကို ခံစားရင်း ကိုဘလက်ရဲ့စာတွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဒီပို့စ်လေးကတော့ တကယ်ကို အကြောင်းအရာ ရသာစုံလွန်းလှပါတယ်။ ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ဂီတနဲ့ပတ်သက်သူတွေရဲ့ အကြောင်းအရာ မှတ်တမ်းတွေ ဖတ်သိရတဲ့အတွက် တကယ်ကို ကျေနပ်မိတယ်။
ပြုံးတယ်၊ ရယ်တယ်၊ စဉ်းစားတယ်၊ ခံပြင်းတယ်၊ ကျေနပ်တယ်၊ ဒေါသထွက်တယ်…. ရဿအစုံကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော်က စာဖတ်တာကိုပဲ အားသန်ရင်း အချိန်ကုန်သွားတတ်တော့ ကွန်မန့်တော်တော်နဲ့ မရေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ဒီနေရာအတွက် ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံးမန့်ချင်းနဲ့ ကိုဘလက်ရဲ့ ၂၀၀မြောက်ပို့စ်ကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။
မိတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာ..ကျနော် ငဘ ပါ။
မနေ့က ယောနသံ အတွက် ကော်ပီ လုပ်ရင်း အချိန်လွန် သွား လို့ တန်ဖိုးကြီး တဲ့ ဘုရင်မ အကြောင်း မှတ်ချက် မရောက်လိုက်ဘူး။
ယောနသံ က မှတ်ချက် နဲ့ အစချီပြီး ရပ်လိုက်တော့ အဓိပ္ပါယ် တစ်မျိုးဖြစ်သွား တာပါ။
ကိုအဘဖော ပြောသလို မိန်းမ တွေ အထက်ကို ပျံ မတက်သင့်ဘူး ဆိုတာ ကို မဆိုလို ပါဘူး။ အဆုံးအစ မရှိ ရပ်ထားမိလို့ စောဒီးပါ။
(ရှင့် အမျိုးသမီး က ဘုရင်မ ဖြစ်လောက်မှာပါ။ :-) )
အမျိုးသမီးတိုင်းကို ဖြစ်နိုင်သ၍ ပိုမြင့်မြင့် ပျံတက်ပြီး အားလုံးကို အပေါ်စီးက မြင်အောင် ကြည့်နိုင်ဖို့ အားပေး ပါတယ်။
ဒါမှ ရှူဒေါင့်စုံ အားလုံး ကို သိနေနိုင်မှာ။
(၂) လိုချင်တာ မိဖုရား၊ ညားတော့ ဘုရင်မ သီချင်းကို မှတ်ချက်ပြုရရင်တော့
ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ် ရဲ့ “ငါ က မိန်းမ ထက် နိမ့်နေပြီလား” လို့ သိမ်ငယ်စိတ် မသိမသာ ဝင်ခဲ့တဲ့ အချိန်တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ခံစားချက် လို့ ထင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒီလို ဖိတ်စာ ကို သူအရမ်းအောင်မြင်နေချိန်မှာ ရခဲ့ရင် သူ သတိထားမိ မယ်တောင် မထင်မိဘူး။
ဒီအချိန်မှာရော “ယောက်ျားကသာ ရှေ့က၊ ယောက်ျားကသာ အိမ်ဦးအရာ” ဖြစ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ဆရာ့ခံစားချက် ဟာ ဒီ အတိုင်းဘဲ မပြောင်းဘဲ ရှိသေးလား မေးကြည့်ချင်မိတယ်။
ဆရာ့ ရဲ့ အရမ်းထက်မြက်တဲ့ သမီး ကို သူ့အမျိုးသား ထက် လူတွေက ပိုဂရုစိုက် ရင် သူ့ကို သူ့ ယောင်္ကျား ရဲ့ နောက်မှာ ဘဲ တကယ် နေခိုင်းမှာလား။
နောက်တစ်ခါ ဆရာစိုင်းခမ်းလိတ် နဲ့ တွေ့ဖို့ ထပ်ကြုံခဲ့ရင် မေးကိုမေးမယ် ကဘချော ရေ။
သူက တော့ ခပ်ပြုံးပြုံး ဘဲ နေနေမှာ ပါ။
တကယ်တော့ အဲဒီ သီချင်းက ဒေါက်တာနွဲ့တင် ကို အပြစ်ဆိုထားတာမှ မဟုတ်တာ။
တဖက်စောင်းနင်း ဆက်ဆံတတ် တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ကို ရွဲ့ပြီး ဖွဲ့ထားတာ မဟုတ်လား။
တကယ်တော့ စစ်မှန်တဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဘုရင်မ ဆိုတာ ဖြစ်ဖို့ အလွယ်နဲ့ မရပါဘူး။
အဲဒီလို ဘုရင်မအရည်အချင်း ရဖို့ လက်ရုံးရည်ရော၊ နှလုံးရည် ပါ ပြည့်ရမှာပါ။
ကျန်တာထား နှလုံးရည် နဲ့ ပြည့်နေပြီ ဆိုကထဲ က သူ့ ယောင်္ကျားဖြစ်နေသူ ကို ပြစ်ထားမှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ။
သူ့စိတ်ရင်း နဲ့ ကို လိုလိုလားလား ဂရုစိုက်မှာပါ။
သေချာတာ က အဲဒီလို ဘုရင်မ ကို ရပြီးရင် နေရာတိုင်းမှာ ကိုယ်ပါမှ အလုပ်ဖြစ်မဲ့၊ ကိုယ့်ကို တစ်ချိန် ကို မှီတွယ်နေမဲ့၊ ကိုယ်က အမြဲဖေးမ နေရမဲ့ မိဖုရား ကို အားမလို အားမရ ဖြစ်မှာပါ။
သတ္တိကောင်း ရင် စမ်းကြည့်ကြပါလား။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘုရင်မ ကိုရထားသူ လို့ တွေးမိကြရင်။
(မှတ်ချက် – ဘုရင်မ ဆိုသည်မှာ အာဏာရှင် လို့ သီချင်းမှာ မပါဘူးနော်)
ယောနသံ လို လေကို ဆန်ပြီး အမြင့်ကြီး ကို ပျံတက်နိုင်တဲ့ ဘုရင်မ ဘဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ဘေးက လူ ကို ပိုပြီး ဂုဏ်မြင့် စေဖို့ပါ။
သီချင်းစာသား ထဲမှာ လဲ ပါပြီးသားပါ။
ဒီလို ဘုရင်မ နဲ့ ညားဖို့ ဆိုတာ အစွမ်းအစ ရှိနေဖို့ လိုတယ်မဟုတ်ပါလား။
ကိုယ်သာ တော်နေပါစေ။ ဘုရင်မ နဲ့လဲ ညားရဲ မှာပါ။
ဘုရင်မ ကလဲ တော်ရုံ လူတော့ ဘယ်ရွေးမလဲ နော့။
(နောက်တာ – ကျွန်မ ဖြစ်သာဖြစ်ချင်တာပါ။ တကယ်တော့ ဘုရင်မ အဆင့် မရှိပါ ;-) )
Expensive ဆိုတာအတွက် တန်ရာတန်ဖိုး တော့ရှိပါတယ်။
(၃) ဆက်ပြောချင်တာ က တော့ အဲဒီ Expensive ဆိုတာ နဲ့ တွဲနေတဲ့ Cheap ဆိုတာဘဲ။ ပစ္စည်းတွေ၊ ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်း တွေမှာ (အားလုံးကို ခြုံပြီး မဆိုလိုချင်ပေမဲ့) ဈေးကြီးတယ် ဆိုတာ အလကားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
စိတ်ချရတယ်။ အားကိုးရတယ်၊ စိတ်အေးနေလို့ရတယ်။ ပွဲလည်တင့်တယ်။ ကလိန်ကကျစ် မရှိဘူး။ (ဖြစ်သင့်ပါတယ်)
ဈေးပေါ တာတွေ ကျတော့ ရိုးသားခြင်း၊ စေတနာ၊ အားစိုက်ထည့်ထားတာတွေ မပါတာမို့ ဘယ်တော့ ထပျက်မလဲ ဆိုပြီး စိတ်မအေးရပါ။
လူတွေမှာ လဲ ဒီလိုပါဘဲ။
Warren Buffett ရဲ့ Excellent Investment quotes ပါ။
“Honesty is very expensive gift.
Do not expect it from cheap people”.
ကျွန်မ တို့ ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူ များထဲ မှာ အဆီယစ်နေတဲ့ Cheap People တွေ အများကြီး နေရာယူ ထားဆဲပါ။ သူတို့ ရှိနေသမျှ တော့ နိုင်ငံအတွက် အဖက်ဖက် က ကောင်းမွန်တဲ့ ရင်းနှီး မြုပ်နှံခြင်း တွေ ရဲ့ အကျိုးအမြတ် တွေ ကို ကျွန်မတို့ လက်လွတ်နေကြရ ဦးမှာ ဘဲ လို့ တွေးမိပါတယ်။
ဒီလူတွေ ကို ဘယ်သူမှ ဖယ်မထုတ်နိုင် ရ လောက် အောင် အထက် က လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူအားလုံး အဆီရစ်ပြီး cheap ဖြစ်နေကြတာလား။
ကျွန်မ တို့ ကတော့ အော်နေရုံက လွဲပြီး ဘာတတ်နိုင်ပါဦးမလဲ သမ္မတကြီးရယ်။
မှန်ရာပြောရရင် ဦးသိန်းစိန် ကိုရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုပါ သနားလှ၊ အားနာလှပါပြီ။
ဒီမိုး၊ ဒီရေ၊ ဒီလူ တွေ နဲ့ ကတော့
နှစ်ရာမြောက် Post လေး အတွက် ၂ခါ မန့်သွားပါတယ်။
နောက် တစ်ခွက် အတွက် ပါ မျှော်နေပါပြီ။
အချိန်လေးပေးပြီး ကျွန်မ တို့ ကို သတင်းထူးလေးတွေနဲ့ အတူ အတွေးဆန်း လေးတွေ မျှနေတာမို့ လေးစား ရင်း ကျေးဇူးတင်ရင်းပါ။
(၂၀၀) ရာပြည့် ပို့(စ်) အတွက်
လေးစားဂုဏ်ပြုပါတယ် ကိုကြီး ဘလက်ခင်ဗျား
ချိုပေါ့ကျ(july) ကို ကြိုက်လွန်းလို့မမန်းသေးဘဲ..
စိုင်းခတ်းလိတ် ရဲ့ဖီး ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်
လူသိနည်း ခံစားခွင့်နည်းနေတာ စိတ်မကောင်းစရာပါဘဲ……
ကဗျာကိုတော့ကြိုက်လွန်းလို့ print ထုတ်သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်……
….ဆံပင်တချို့ဖြူနေပေမဲ့ အရှိကိုအရှိတိုင်ဘဲ ထားလိုက်ပါတယ်လေ..
ဒီဆံပင်ဖြူတာလေးပြန်တွေ့နေရတာကိုဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးနေတယ်မဟုတ်လား….
….ဟိုတုန်းက Sexy ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အေးအေးသင်း….ဆိုလို့
ကျနော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ခင်သန်းနု တို့ဒေစီကျော်ဝင်းတို့ဆို့
…ကြုံတုန်းပြောရအုံးမယ် ဘုရားဒကာရေ ၈၈အရေးအခင်းတုန်းက ပန်းဆိုးတန်းလမ်းမှာ
အိမ်အပေါ်ထပ် ၀ရန်တာကနေထွက်ပြီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ ဟောပြောကြတာ
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အောင်လွင် နောက်သူ့သမီးငယ် ဆွေဇင်ထိုက် ကြည်စိုး တို့တွေ
ပါတာတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ် အဆိုတော်ထဲမှာဆိုယင် စိုင်းထီဆိုင်က ဆန္ဒပြပွဲမှာရှေ့ဆုံးကအလံကိုင်ချီတက်တာတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်
လွမ်းမိုးဆို ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာအလံဝေရမ်းလို့ ဆရာမင်းသင်္ခဆို တာမွေကြက်ရှာစွန်းမှာ
ငယ်ငယ်လေးကကို ကြားဖူးနေတဲ့အပြင် ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတပုဒ်ပါ။
မျက်စိနာနေလို့ ကွန်ပျူတာရှေ့မရောက်၊ လောကကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသလိုဖြစ်တာ ၁၀ရက်လောက်ရှိပေါ့.. ဦးဘလက်ရဲ့ သတင်းစုံ ဂျူလိုင်ချိုပေါ့ကျလေး ၀င်ဆွဲလိုက်တယ်..
ယောနသံဇင်ယော်အကြောင်း ဦးလေး စာအုပ်ပုံထဲက ယူဖတ်တုန်းက ၆ တန်းလား ၇တန်းလားပဲ..
ဘ၀ အားမာန်၊ ဇွဲတွေ ဘာတွေ နားလည်သေးဘူး.. ဇင်ယော်လေး ကြိုးစားပန်းစား ပျံသန်းမှု အတတ်ရှာပုံတော်မှာ လိုက် မျောလို့၊ သူ အကျနာတာ ကိုယ်နာသလို.. သူ စိတ်ကြိုက် ပျံသွားတယ်ဆို ကိုယ်ပါလေပေါ်ရောက်သလို ခံစားမိပြီး ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့(ယောနသံနဲ့အပြိုင်) ဖတ်ခဲ့တာ..
ဒေါ်… နှင့် ခင်ပွန်းဆိုပြီး ဖိတ်စာလေးရထားတာ ဘာကြာသေးလို့တုန်း
ခုနေထိ စားပွဲပေါ်ကတောင် မသိမ်းရသေးဘူးထင်တယ်..( ကျနော့နာမည် လွဲရေးမိမှာစိုးလို့ ဟုပြောပါသည်)
နိုင်ငံရေးအကြောင်းတော့ ၀င်မအာတော့ပါဘူးဗျာ… အကောင်းဘက်ကို အပြောင်းအလဲတွေ အမြန်ဖြစ်ပါစေ လို့ပဲ ဆုတောင်းတော့မယ်…
ပုဂံပန်းချီ ၁ ၊ ၂ လည်း ခိုက်တယ်ဗျာ
@ စိန်ဗိုက်ဗိုက် ;
ဒီပို့စ်လေးတင်ပြီး တော်တော် ကြာတဲ့အထိ ကွန်းမန့် တစ်ခုမှတက်မလာခဲ့ပါဘူး…။
အဲဒီအချိန်မှာ ညီလေးရဲ့ ကွန်းမန့်လေး က အရင်ဦးဆုံးတက်လာခဲ့တဲ့အတွက်
အခုလောလော ဆယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် အဲဒီလို ရေးတတ်နေပြီဗျ…။
ဒီလောက်ရှည်လျားပေများတဲ့ ပို့စ်ကြီးကို တစ်ခါတည်း ချက်ခြင်းကြီးဖတ်ပြီး ကွန်းမန့်ပေးဖို့က
ဘယ်လိုမှ မလွယ်ကူသော ကိစ္စပါ…။
ဖတ်သွားတယ်ဆိုတာလေး ကို အချက်ပြရင်း ပြန်လာခဲ့မယ် ဆိုတာလေး ပြောသွားတာ အခု
ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုလို့တောင် ပြောလို့ရနေပြီဗျ…။
အဲဒါလည်း ဂီဂီ က စလိုက်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလို့ ကိုယ်မှတ်မိနေပါတယ်…။
ဘယ့်နှယ့် ဆိုက်ကားနင်းတယ်လည်း ပြောသေး၊ မန်နေဂျာလစ်တဲ့ အချိန်လေး ၀င်ဖတ်ရတယ်လည်း ဆိုထားသေး ဟေးဟေး။
သူကြီးက ဒေါင်း ကို ချစ်ပေမယ့် ကိုယ်ကတော့ စင်ရော်ကို ချစ်ပါတယ် ဗျာ…။
သို့သော် ဒေါင်းလည်း ငှက် စင်ရော် လည်း ငှက်…။
ကိုယ်သိတ်ကြိုက်တဲ့ စာသားလေး တစ်ခု ရှိတယ်ဗျ…။
လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ တစ်နေ့
ကောင်းကင်မှာ တွေ့ကြမယ် …
ဒေါင်းတွေရော…၊ စင်ရော်တွေရော…၊ သိန်းငှက်တွေရော…
(လဒကလည်း ပျံသန်းတဲ့ ငှက်ပေပဲမို့ ငှက်မျက်နှာလိုက်လို့ မရလို့ပါ)
လွတ်လပ်စွာပျံသန်းနိုင်တဲ့ တစ်နေ့ ကောင်းကင်မှာ တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ…။
နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတယ်… ဆိုတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်လို့ကျော် သိတာကတော့
တစ်ခုခုဖီးလ်ဖြစ်တိုင်း ဘီအီး ငါးဆယ်ဘိုး သွားကစ်လိုက်တာပါပဲဗျာ…
ဆိုတာလေးကလည်း နေရာကျနေပြန်တာပါပဲ ကျော်ရေ…။
နံရံကို လက်သီးနဲ့ထိုးရင် လက်နာနေဦးမယ်…။
အဲဒီ အတွေးအရေးလေးအတွက်လည်း ဗရာကျော်ပါဗျာ…။
နိုင်ငံတော်အလံ အလေးပြု၊ မပြု ကိစ္စမှာ သူကြီးပေးထားတဲ့ ကွန်းမန့်လေး ကိုယ်လည်း ကြိုက်ပါတယ်ဗျာ..။
စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဖတ်ပြီး ရေးထားတဲ့ ကွန်းမန့်လေးကို ကိုယ်ကလည်း
စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း လေးလေးစားစား ပြန်ကွန်းမန့်လိုက်ပါတယ်
လွတ်လပ်စွာ ပါမစ်ရတဲ့တစ်နေ့ 
ဘီအီးဆိုင်မှာ တွေ့ ကြပါမယ်..
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ကိုငပွကြီးရေ…။
ဒုတိယမြောက် ထောင်သွားတယ် ဆိုတဲ့ လက်မလေးအတွက်
ဘာမှ ၀င်မပွားသွားတဲ့ အတွက်တော့ အနည်းငယ်
စောင့်ဖတ်နေကြသူတွေ ရှိနေတယ်လို့ ခိုင်လုံသော သတင်းရပ်ကွက်က
နောက်လကျရင် ပွားရင်လည်း ကြုံသွားပါဦးခင်ဗျာ..။
ကြုံရင်လည်း ပွားသွားပါဦးလို့ ပြောတာပါ…။
@ ကိုရင်မိုးတိမ် ;
အကျိုးပြုတဲ့ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် ဆိုလို့ ဖတ်ရရေးရကျိုးနပ်ပါတယ် ညီလေးရေ…။
လစဉ်ရေးနိုင်အောင်လည်း ကြိုးစားပါ့မယ် ဗျာ…။
အားပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်း အားဆေးသောက်လိုက်ရသလို အားရှိသွားပါတယ်…။
အဆုံးအစမရှိတဲ့ ပင်လယ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းနေချိန်မှာ ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက်
@ lynn lynn ;
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ လင်းလင်းရေ..။
နောက်လတွေမှာ ၀င်လို့ ကြုံရင်လည်း ၀င်အားပေးသွားပါဦးနော့….
မလွတ်တမ်း ရွေးဖတ်တဲ့ ပို့စ် မျိုးလို့ ပြောသွားတာကို ဖတ်ပြီး
မလွတ်တမ်း မြောက်သွားပါတယ် ဗျာ…။
ကွန်းမန့်လေး အတွက်ကျေးဇူးပါ etone ရေ…။
စနေနေ့ညနေကပဲ ဆရာ ခမ်းလိတ်ကို ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ်ဟော်တယ် မှာ ဆုံမိတယ်။ ခြေထောက်ဘာဖြစ်လို့လည်းမသိဘူး ချိုင်းထောက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့။
ကျုပ်လည်း ဆက်ဆီပုံတွေ မရိုက်ချင်တော့ဘူး။ သူများတွေ အန်ချင်သွားမှာ စိုးလို့။ ညစ်ညမ်းဝက်ဆိုက်ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလည်း ကျုပ်လည်းမကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒေါက်တာချက်ကြီးတို့ သဇင်တို့တော့ ပြောတာကြားဖူးပါရဲ့။
ချိုပေါ့ကျမဟုတ်ဘူး။ ခုလိုမိုးအေးအေးမှာ ကဗျာလေးတွေ ဖတ်ရင်း ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်ကို ငုံရင်းနဲ့ ဖတ်ရတဲ့အရသာကတော့ ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး။ ကဗျာတွေရယ်၊ စာတွေရယ်၊ အစုံပလုံဖတ်ရတာ ဒီနေ့တော့ အတော် တန်ဖိုးရှိသွားပြီ။ မသောက်ရတာ ကြာ… အဲ မဖတ်ရတာ ကြာပြီလေ…
ကော်ဖီခါးခါး ဆိုတော့လည်း ကော်ဖီခါးခါးပေါ့ဗျာ…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးသွားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ…။
@ သန်းထွဋ်ဦး ;
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ…။
ဒေါသထွက်တိုင်း နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထထ ထိုးမနေနဲ့ဦးဗျ…။
ဖတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ ကွန်းမန့်လေး အတွက်ကျေးဇူးပါ ဗျာ…။
ဦးလေး ဖြူကြမ်း ဆိုတဲ့ နာမည် အသစ်အဆန်းအတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ…။
ဓါတ်ပုံလေးတွေ အားပေးသွားတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်နေပါကြောင်း…။
“နံရံကို လက်သီးနဲ့ ထိုးမိတယ်” သီချင်းက.. စိုင်းထီးစိုင်ဆိုတာတွေထဲ.. ခိုင်ထူးအကြိုက်ဆုံးလို့.. အင်တာဗျုးတခုခုမှာ ပြောဖူးတယ်မှတ်မိတယ်..
ချိုပေါ့ကျထဲ..ကော်မန့် ရေးမယ်ရေးမယ်နဲ့.. မရေးဖြစ်နေလို့.. ၀င်တန်းစီတာပါ..။
နောက်ကျတော့.. ၀ိုင်းထဲ.. ဘာမှတောင်မကျန်သလိုလို…
ကျွန်တော်တို.လို လူငယ်တွေ ကို ကိုယ်သန်ရာသန်ရာ လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့ အုပ်ထိန်းသူ မိဘ အသိုင်းအ၀ိုင်း လိုတယ်ပေါ့နော်……. လူငယ်တွေကို ယောနသန်ဇင်ရော် မဖြစ်စေချင်ဘူး ကျောင်းဒကာရေ….
အဲဒါပြောတာဗျ…။ ဖတ်သူကိုလိုက်ပြီး အမြင်လေးတွေ ကွဲပြားတယ်ဆိုတာ…။
ဆယ်အိမ်ခေါင်းရွှေတိုက်နဲ့ မခင်အုပ်တို့ မင်္ဂလာဆောင် မှာ လက်ဖွဲ့ဖို့ အခုကတည်းက
အခုအချိန်မှာတော့ ကိုယ့်ညီလေးတစ်ယောက် ရဲရဲရင့်ရင့် လေဟုန်စီးနိုင်နေပြီလို့ ယူဆပါတယ်ဗျာ…။
ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ နိုင်ငံတော် အလံ အလေးပြုသင့် မပြုသင့် ဆိုတဲ့ ကိစ္စကလည်း
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အမြင်မတူနိုင်ကြပြန်ဘူး ညီလေးရေ…။
ချမ်းမီမီကို လေး ဆေးရုံက ဆင်းလို့ ဗီဒီယိုတောင် ပြန်ရိုက်နေပါပြီဗျာ…။
လောလော ဆယ်တော့ မရယ်မိအောင် သတိထားနေရပါတယ်တဲ့…။
တစ်ခါတစ်လေ သတိလွတ်ပြီး ရယ်မိတာလည်း ရှိပါတယ်တဲ့…။
အားထည့်ပြီး ရေးထားတဲ့ ကွန်းမန့်လေးအတွက်
တစ်ခါတစ်လေတော့ ဘ၀မှာ အရိုးအရင်းလေးတွေလောက်နဲ့
ကျေနပ်နေရတဲ့ အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းရတတ်ပါတယ် ညီလေးရေ…။
ကျန်းမာရေးကတော့ ၄၀ ကျော်လာပြီဆိုတော့
သိတ်ပေလို့ မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ…။ သတိလေးထားနေရတာပေါ့…နော့။
အော် ဇရာ…၊ ဇရာ…။
အဲဒီ အခြေခံဥပဒေ ပြောင်းဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပဲ ညီလေးရေ…။
အမေစု ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အခြေခံဥပဒေက
ပြောင်းကို ပြောင်းမှ ရမှာပါ…။
ကိုယ့်တော့ ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာပဲ ပြောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့
နိုင်ငံတော် အလံကို လေးစားဖို့ကတော့ ညီပြောသလို
မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူဖို့လိုတယ် ဆိုတာ အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ…။
ဦးရွှေမန်း မှ မဟုတ်ဘူးဗျ…။
အားလုံးရဲ့ STRATEGY တွေ ပြောင်းနေကြပြီဆိုတာ…
အင်မတန်မှ ထင်ရှား မြင်သာပါတယ်ဗျာ…။
အောင်သိန်းလင်းကြီးကတော့ ကျန် ကို ကျန်နေခဲ့တာဗျ…။
ဘာပဲပြောပြော ထောင်သွားတဲ့ လက်မအတွက်ရော…၊
ပေးသွားတဲ့ ကွန်းမန့်အတွက်ရော ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း…….။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ တီချယ်ကြီးရေ…။
မတွေ့တာ ကြာဆို ကွန်းမန့်တွေ ရေးဖို့ အချိန်မရတော့တာပါ ခင်ဗျာ..။
ကျွန်တော် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုထဲ ပြန်ရောက်နေလို့ ပါ တီချယ်ကြီးရေ…။
ရေးအားက ဒီလောက်မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ…။
ပို့စ်တစ်ပုဒ်ထဲမှာ ထည့်ရေးလိုက်လို့ များတယ်ထင်ရတာပါ…။
ဒါတောင် ဖြုတ်ချထားခဲ့တာတွေ အများကြီးခင်ဗျ…။
နောက်ပြီး ဒီလို ပို့စ်တွေက သူများရေးပြီးသားတွေကို
ကိုယ်က ထပ်ကွန့်ရေးရုံဆိုတော့ သိတ်ပြီး အားစိုက်ရတယ်လည်း မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ…။
သင်္ကြန်တစ်တွင်းလုံး ပုဂံမှာ စိတ်အေးလက်အေး ရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုဂံပုံတွေက
မန့်ဖို့ရာလဲ ပြောကွက်မရှိ ပြည့်စုံနေတော့
တခါတလေလဲ သာသာထိုးထိုး ပြောချင် ဆွေးနွေးချင်ရဲ့
ချိုပေါ့ကျ (August) မြန်မြန်ထွက်ပါဗျို့……………..။
၂၀၀ ပို့စ်အတွက် လေးစားဂုဏ်ယူလျက်…၊
နောက်ထပ် ချိုပေါ့ကျတစ်ခွက်အား စောင့်မျှော်လျက်…။
@ Solid_Sn@ke ;
ဥာဏ်မှီသလောက်လေး တဲ့လား ညီလေးရေ…။
အမြင့်ဆုံးပျံမှ အဝေးဆုံးကို မြင်ရမှာမို့
အမှန်ကတော့ မိဖုရားတွေ ဘုရင်မတွေ ရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ…
ညားပြီးမှတော့ ကိုယ့် မိန်းမ ကိုယ် မိဖုရားဖြစ်စေချင်တဲ့ နေရာ မိဖုရား ပေါ့
ဘုရင်မ ဖြစ်စေချင်တဲ့ နေရာ ဘုရင်မပေါ့…
မိဖုရားလိုမိန်းမ နဲ့ ဘုရင်မလို မိန်းမ
အို ဒါလည်း ရလို့ကတော့ ယူသာယူညီလေးရေ…။
မသေခင် လုပ်ချင်တာ အကုန်သာလုပ်ဟေ့…။
ကိုဝင်းမော် အတွက် အသိအမှတ်ပြု ပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ….။
ချမ်းမီမီကိုအမာရွတ်ကိစ္စကတော့ ညီပြန်လာမှ ဆက်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့…။
အခုတော့ ညီပြောတဲ့ ချက်ကနေ ညာဘက် ပေါင်ရင်းဆိုတာကြီး ဖတ်ပြီး…
အော်… ကက်သရင်းဇီတာဂျုန်းကြီးကို မြင်သလိုကို မြင်နေပြီ ကိုကိုရေ…။ ဟီး။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြန်မပြင်ရလောက်အောင် ပြည့်စုံတဲ့ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ မရှိ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့
အချိန်မရတဲ့ကြားက အပေါ်တက်လိုက် အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ ရေးပေးခဲ့တဲ့
ကွန်းမန့်အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ ညီလေးရေ….။
PS. တစ်လ နှစ်ခွက်လောက် တိုက်ပါလား
@ ကိုသင်း ;
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးတာနဲ့တင် ကျေးဇူးတင်နေပါပြီ ကိုသင်းရေ…။
စိတ်ထဲ အဆာပြေတယ်ဆိုရင် ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာ…။
@ Thanlwinoo ;
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ…။
မအားတဲ့ကြားက အားပေးသွားတာကို လေးလေးစားစား
ချိုပေါ့ကျ လာသောက်သွားတာ ကျေးဇူးပါ ညီလေးရေ…။
@ ကိုသစ်မင်း ;
ပြောချင်ရာသာ ပြောတော့ ကိုသစ်ရေ…။
ကျွန်တော့်ပို့စ်မှာ ကျွန်တော် ရွေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဘီစီက
@ Nga Ba
@ P chogyi
@ Ye yint haling
@ M Lulin
အားလုံးသော ကွန်းမန့်ရေးသူများကို တစ်ဦးချင်းစီ
လေးလေးစားစား တုန့်ပြန်ချင်ပေမယ့် အချိန်အခက်အခဲကြောင့်
@ Shwe Ei
@ Aye. Kk
@ Phaung phaung
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပျက်ကွက်မှုအတွက် ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဗျို့….။
စိတ်ရှည်လက်ရှည် စိတ်ဝင်တစား ပေးခဲ့ကြတဲ့ ကွန်းမန့်လေးတွေအတွက်
ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိနေပါတယ် ဆိုတာလေး ပြောပါရစေခင်ဗျာ…။
မအားလပ်တဲ့ ကြားက ကွန်းမန့်လေး ၀င်ချီးမြှင့်ပေးသွားတာ
မလာရင် လူပျောက်ကြော်ငြာ သတင်းစာထဲထည့်ရပါမယ်။
Wanted Dead or Alive ဆုတော်ငွေ ငါးကျပ်
ဒီတစ်ခါ ပြသနာက မလွယ်ပုံရတယ်
လူ့ ဘောင်လောက ကို စွန့် ခွာပြီး ရဟန်းဘဝ ခံယူသွားပြီလား မသိ
လှည်တန်းက ကောင်မလေး ကို ဖုံးဆက်မေးတော့
သူ့ ဆီမလာတာ တစ်လလောက် ရှိသွားပြီ ဆိုလား
နေကောင်းပြီး နာလံထ ပြန်ထ စ မို့ ဗီတိုအာဏာ နဲ့ အွန်လိုင်း မဝင်ရ သေးတာများလား။
စာရေး/စာဖတ်ဝါသနာရှင်များ ကို ချိုပေါ့ကျ သွားတိုက်လိုက်ပါတယ်နော်၊အော်ဒါလာရင်တော့ ကိုယ့်ဖာသာ ကြည့်ရှင်းဗျာ။ဒါဗျဲ။